Dopaminergic ဆုချီးမြှင့်မှုခံစားချက်သည်ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ventral striatum activation (2016) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Dopaminergic ဆုလာဘ် sensitivity ကိုဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်နိုင်သည် ventral striatum activation (2016) ၏ယန္တရားအပေါ်သစ်ရှုထောင့်
အီဗာအိပ်ချ် Telzera, b, c,
Volume ကို 17ဖေဖော်ဝါရီလ 2016, စာမျက်နှာများ 57-67
အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်ကလူမှုရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းမှ၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်, အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် orienting တစ်တာဝန်ယူမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်စိတ်မချရသောသုခချမ်းသာအတွက်ရရှိလာတဲ့အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လယ်ပြင်တွင်အဆိုပါရေပန်းစားအမြင်ကြောင်းမြင့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုငွေပြမှုအမြင်နှင့်အတူကိုက်ညီမှုအများအပြားတွေ့ရှိချက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ် sensitivity ကိုအကြီးအကျယ်တစ်တာဝန်ယူမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် striatal reactivity ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြီးထွားသောအလားအလာသပ္ပါယ် function ကိုမီးမောင်းထိုးပြသောရှုထောင့်ကိုစိန်ခေါ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopaminergic ဆုလာဘ် sensitivity ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမွမ်းမံရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတော်တော်များများလေ့လာမှုများ ventral striatum activation မြီးကောင်ပေါက် '' နျြးမာရေးအတှကျတစ်ဦးသပ္ပါယ် function ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းနဲ့ကောင်းစွာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကျဆင်းမှုနှင့်သိမြင်မှုဇွဲနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ပေးရန်နှင့်စပ်လျဉ်းခံရပြန်လည်သုံးသပ်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်မတ်စောက်သောတိုး, စိတ်ခံစားမှု lability, သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အမူအကျင့်စည်းမျဉ်း (နေဖြင့်မှတ်သားတဲ့အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အားနည်းချက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလဖြစ်ပါသည်Steinberg, 2005) ။ ထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏တိုးမြှင့်နှုန်းထား (ဆိုလိုသည်မှာ internalizing ပြဿနာများ) မှဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ရောဂါနှင့်စည်းမျဉ်းကိုချိုးဖောက်အပြုအမူတွေလုပ်ဆောင်သူတို့၏မြင့်ပျံ့နှံ့, နာတာရှည်, နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကမောင်းထုတ်သိသာထင်ရှားသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ခံရသည်ဟု (ဆိုလိုသည်မှာ externalizing ပြဿနာများ) ။ ဥပမာအားဖြင့်များစွာသောစိတ်ရောဂါမမှန်စတင်ခြင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာစိတ်ကျရောဂါလုလင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအနှစ်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်း 500% မှငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ 400% မြင့်တက်နှင့်အတူ (ကြည့်ရှု Thapar et al ။ , 2012) ။ ရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းနှုန်းထားများ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ 300% တိုးမြှင့်CDC, 2014) ဆယ်ကျော်သက်သေဆုံးမှု၏ 70% ကျော်နှစ်စဉ်နှင့်အတူကြောင့်မော်တော်ယာဉ်ပျက်ကျ, ရည်ရွယ်တဲ့ဒဏ်ရာ, လူသတ်မှုနှင့်သတ်သေအပါအဝင်ကာကွယ်နိုင်သောအကြောင်းတရားများမှ (CDC, 2013) ။ လူ့လူငယ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience လေ့လာမှုများအနေဖြင့်မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထား (ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပြတ်တောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရောဂါလက္ခဏာတွေ internalizing နှင့် externalizing အတွက်တိုးအခြေခံစေခြင်းငှါပြတော်မူပြီလှံ, 2011).
1 ။ ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ထိပ်
ကြွက်, nonhuman မျောက်ဝံများနှင့်လူသားမြားသညျအပါအဝင်အများအပြားမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီး, မြီးကောင်ပေါက် (ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ခိုင်မာသောသက်သေအထောက်အထားများကိုဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက်ထိပ်ကိုပြသလှံ, 2011). ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အသစ်အဆန်း-ရှာကြံ (အပါအဝင်အပြုသဘောအကျိုးလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုး၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ၎င်းတို့၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံများမှာဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2003လူမှုရေး interaction က၏), အကြိုးသက်ရောက်မှု (ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2004), သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူ (Friemel et al ။ , 2010 နှင့် လှံ, 2011), နှင့်အရေးပါတယ်လို့ testants (Vaidya et al ။ , 2004, Wilmouth နှင့်လှံ, 2009 နှင့် Friemel et al ။ , 2010) ။ လူ့မျောက်ဝံများမှာတော့ပြောင်းပြန်လှန် U-shaped ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံများအပြုအမူတွေကိုရှာကြံဆုလာဘ်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လူ့မြီးကောင်ပေါက် Self-အစီရင်ခံဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုအတွက်ထိပ် (ရှာကြံပြသSteinberg et al ။ , 2009 နှင့် Romer et al ။ , 2010တစ်ဦးအမူအကျင့်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်းအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်မှ), သာ. ကြီးမြတ် sensitivity ကို (Cauffman et al ။ , 2010), နှင့်ချိုမြိန်တ္ထုများမှမြင့်ဦးစားပေးများနှင့် reactivity ကို (သွပ်ရည်စိမ်နှင့် McGlennen, 2013 နှင့် စာတိုက်နှင့် Kemper, 1993) ။ အပြုအမူတွေနဲ့ဦးစားပေးရှာကြံဆုလာဘ်တွင်ဤအမူအကျင့်ဆိုင်း frontostriatal circuitry အတွက်နောက်ခံအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကိုအသုံးပြုပုံတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်မောင်းနှင်နေကြသည်။
2 ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Dopaminergic အပြောင်းအလဲများ
ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များ subserving Frontostriatal ဆားကစ်အဆိုပါမူလတန်းဆုလာဘ် circuit ကိုတုန့်ပြန် dopamine လွှတ်ပေးရန်သောနျူကလိယ accumbens ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှ dopaminergic စီမံချက်များမှဆုချ-related လှုံ့ဆော်မှု (ပါဝင်သည်အဆိုပါ neurotransmitter dopamine (DA) က modulated နေကြတယ်Russo နှင့် Nestler, 2013) ။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့်အထူးသဖြင့်အတွင်းနျူကလိယ accumbens, ဆုလာဘ်မောင်းနှင်အပြုအမူတွေ (ကြည့်မြင်မက်လုံးတစ်ခု core ကို node ကိုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပြီး Padmanabhan နှင့် Luna, 2014 နှင့် သွပ်ရည်စိမ်, 2014) ။ DA အချက်ပြအားဖြည့်သင်ယူမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပြောင်းလဲဖြစ်ကြောင်း striatal နှင့် prefrontal function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏ DA မော်ဂျူ (ထောက်ခံပါသည်Padmanabhan နှင့် Luna, 2014). (ဥပမာ, VTA; substantia nigra) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်အံ့သြဖွယ်ပြောင်းလဲမှုကိုခံယူသောဆုလာဘ်စနစ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုဦးနှောက်၏အခြေစိုက်စခန်းအတွက်နက်ရှိုင်းသော DA အာရုံခံထံမှစီမံချက်များပါဝင်ပါသည်အဆိုပါ striatum အပါအဝင် subcortical ဒေသများ, အဖြစ် prefrontal cortex (PFC) နှင့် အဆိုပါ amygdala နှင့် hippocampus အပါအဝင်အခြား cortical ဒေသများ။ အဆိုပါ VTA ဖို့နျူကလိယ accumbens ထံမှ GABAergic စီမံချက်များလည်းရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကိုတိုက်ရိုက် VTA innervate ထားတဲ့ D1-type အမျိုးအစားအလတ်စား spiny အာရုံခံကကမကထပြုခဲ့သောတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း, မှတစ်ဆင့်စီမံကိန်းနှင့် GABAergic အာရုံခံမှတဆင့် VTA innervate ထားတဲ့ D2-type အမျိုးအစားအလတ်စား spiny အာရုံခံကကမကထပြုခဲ့သောသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း, မှတစ်ဆင့်စီမံချက်များပါဝင်ပါသည် (ထို ventral pallidum အတွက်Russo နှင့် Nestler, 2013) ။ ဤအဆုလာဘ်-ဒေသများအားလုံးတွေ့မြင် (ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည် သဖန်းသီး။ 1).
သင်္ဘောသဖန်း။ 1 ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ Dopaminergic လမ်းကြောင်း။
အဆိုပါ DA system ကို adolescenc စဉ်အတွင်းပေါ်လာကြောင်းအမျိုးမျိုးသောရောဂါ၏ pathophysiology အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, ကျော်သိသိသာသာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသည်းခံအီး (ကြည့်ရှု နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005, လှံ, 2000 နှင့် Wahlstrom et al ။ , 2010a). ကြွက်, Non-လူ့မျောက်ဝံများနှင့်လူသားမြားသညျအနှံ့, dopamine အတွက်တိုးမြှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးအချက်ပြ (မြင် Wahlstrom et al ။ , 2010b). ဆယ်ကျော်သက်-တိကျတဲ့ထိပ်ကြွက်များတွင် ventral striatum အတွက် dopamine receptors D1 နှင့် D2 ၏သိပ်သည်းဆအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီ (Andersen က et al ။ , 1997, Tarazi et al ။ , 1999, Teicher et al ။ , 1995, Badanich et al ။ , 2006 နှင့် Philpot et al ။ , 2009), အနည်းငယ်လေ့လာမှုများလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့် (Matthews က et al ။ , 2013 နှင့် Sturman နှင့် Moghaddam, 2012). ထိုမှတပါး, DA ပြင်းအားနှင့် PFC မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အမျှင်များ၏သိပ်သည်းဆမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့တိုးမြှင့် (ဂိ et al ။ , 2000), အဖြစ် PFC စီမံကိန်း၏အရေအတွက်နျူကလိယ accumbens မှ (Brenhouse et al ။ , 2008). မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင် Non-လူ့မျောက်ဝံများ, ဒေသ-ကျယ်ပြန့် DA innervation ထိပ်မှာတော့ (ကြည့်ရှု Wahlstrom et al ။ , 2010b).
လူသားမြားသညျနှင့်အတူလေ့လာရေးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း DA စကားရပ်အလားတူထိပ်ကဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကိုယ်ဎထို့နောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အထိ striatum တိုးအတွက် Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာနမူနာ, DA အဆင့်ဆင့်လူ့ခြင်းနှင့်လျှော့သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်ရှိနေဆဲ (Haycock et al ။ , 2003), axon ၏အရှည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ် axon ထုတ်လုပ်တဲ့စုစုပေါင်းအရေအတွက်က (သိုးသငယ်ကို et al ။ , 2000 နှင့် Rosenberg ကနှင့် Lewis က, 1994) ။ T ကဒီနေရာမှာတစ်ဦးအထွတ်အထိပ်အထူးသ D1-ဖော်ပြအာရုံခံထဲမှာ, PFC ထံမှနျူကလိယ accumebens မှ glutamatergic ဆက်သွယ်မှုမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် (Brenhouse et al ။ , 2008). နောက်ဆုံးအနေနဲ့ DA အားဖြင့် innervated အာရုံကြောစနစ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများအကဲဖြတ်ဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ fMRI လေ့လာမှုများ, အလယ်တန်းဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ ventral striatum ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားသိသိသာသာပိုမိုတက်ကြွစွာကြောင်းပြသကြ (ဥပမာ, ပိုက်ဆံ; Ernst et al ။ , 2005, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006 နှင့် ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2010), မူလတန်းဆုလာဘ် (ဥပမာ, ချိုမြိန်အရည်; သွပ်ရည်စိမ်နှင့် McGlennen, 2013), သို့မဟုတ်လူမှုရေးဆုလာဘ် (ချိန် et al ။ , 2010 နှင့် Guyer et al ။ , 2009) အဖြစ်စာစားချင်စိတ်ကိုလူမှုရေးတွေကိုရှေ့မှောက်တွင် (Somerville et al ။ , 2011). ventral striatum activation အတွက်ထိုကဲ့သို့သောထိပ်ညှိသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Somerville et al ။ , 2011) နှင့် Self-အစီရင်ခံအန္တရာယ်ယူပြီးတိုးလာ (သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007) ။ အချို့လေ့လာမှုများကိုလည်းဆုလာဘ်ထားချက်အရတဲ့အခါမှာမြီးကောင်ပေါက် (ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများမှတုံး ventral striatum activation ဆွေမျိုးပြသသောတွေ့ပြီBjork et al ။ , 2004 နှင့် Bjork et al ။ , 2010), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတုံး striatal activation သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုယူပြီးနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Schneider et al ။ , 2012). အဆိုပါ ventral striatum ၏ Hypoactivation မြီးကောင်ပေါက်ကသူတို့ကို dopamine-related circuitry အတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်း သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်-inducing အတွေ့အကြုံများထွက်ရှာမောင်းသောအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ဒီထက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုမှီစေခြင်းငှါအကြံပြုဖို့စောဒကတက်တာဖြစ်ပါတယ် (လှံ, 2000).
ဒါဟာ (ထို DA စနစ်ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတစ်အလုပ်လုပ်တဲ့မျက်နှာကျက်မှာကြောင်းတွေးဆနေပါတယ်ကုန်သည်များ et al ။ , 2014), DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်, ခြုံငုံပိုမိုမြင့်မားလုပ်သူများ DA အဆင့်ဆင့်, သာ. ကြီးမြတ် DA innervation နှင့် DA အဲဒီ receptor အထိတိုးမြှင့်အတွက်ထိပ်များကသက်သေအဖြစ် (ကြည့်ရှု Padmanabhan နှင့် Luna, 2014). ထို့ကြောင့် mesolimbic DA စနစ်ကအမူအကျင့်ရလဒ်များအဘို့အအရေးကြီးသောအလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုရှိပြီးဖြစ်သောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Overdrive တစ်ပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။ ဒါဟာအစထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens အဖြစ် limbic ဒေသများဆီက input biases သော DA "အလွန်အကျွံသုံးစွဲ" တွင်ရရှိလာတဲ့သည် PFC အတွက်လုပ်သူများ DA အဆင့်ဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကောင်းဆုံးအဆင့်ဆင့်ကျော်လွန်မြင့်တက်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ (ဥပမာ, Wahlstrom et al ။ , 2010a) ။ T ကDA အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာ၌သူ၏ပြောင်းကုန်ပြီနျူကလီးယပ်အတွက် DA လှုပ်ရှားမှုပိုမိုအလုပ်လုပ်တဲ့အဆင့်ဆင့်ဆိုင်းအချက်အလက်များကိုနျူကလိယ accumbens အပေါ် သာ. ကြီးမြတ် limbic နှင့်လျော့နည်း PFC သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆီသို့စီးဆင်း accumbens ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, သတင်းအချက်အလက်များ၏ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် PFC နှင့် limbic ဒေသများအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များမှတ်သားကြနိုင် (လှံ, 2011).
3 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopaminergic reactivity ကိုအပေါ်လိုငွေပြမှုရှုထောင့်
DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းဆယ်ကျော်သက်ရွယ်-တိကျတဲ့ထိပ်ကျယ်ပြန့် (အသစ်အဆန်းများအတွက်ဦးစားပေး, အန္တရာယ်များအခြေအနေများတွင်တိုးမြှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်များစွာသောစိတ်ရောဂါမမှန်စတင်ခြင်းအပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဆုလာဘ်ဆီသို့ကြီးထွားလမ်းကြောင်းမတူညီများအတွက်အကောင့်မှထင်နေကြတယ်Wahlstrom et al ။ , 2010b). ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လယ်ပြင်တွင်အဆိုပါရေပန်းစားအမြင်ကတော့ mesolimbic DA စနစ်မြင့်လှုပ်ရှားမှုလူမှုရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းမှ၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်, အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် orienting တစ်တာဝန်ယူမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်စိတ်မချရသောသုခချမ်းသာမှုကြောင့် (ဥပမာ, ကာဇီ et al ။ , 2008 နှင့် ကုန်သည်များ et al ။ , 2014) ။ T ကherefore, (, မျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုဆောင်ရွက်မှုတွေ, ဥပမာထွက်ခွာသွားနှင့် inbreeding လျော့နည်းသွား) striatal reactivity ကိုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ထိပ်သပ္ပါယ်ရည်ရွယ်ချက်များပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမည်နေစဉ်, ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် striatal reactivity ကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပိုနှင့်ပင်ဘဝကိုခြိမ်းခြောက်ဖြစ်နိုင်သည် (လှံ, 2008) ။ တကယ်ပါပဲ, လူ့မြီးကောင်ပေါက်များ၏ neuroimaging လေ့လာမှုများများစွာကိုဖြတ်ပြီး, ventral striatum activation မြားတှငျပွောငျးလဲမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အသုံးပြုမှုအပါအဝင်အပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ (Jager et al ။ , 2013), စိတ်ကျရောဂါ (Telzer et al ။ , 2014 နှင့် ပိုး et al ။ , 2013), စိုးရိမ်ခြင်း (ဘား-Haim et al ။ , 2009 နှင့် Guyer et al ။ , 2006), s ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန် usceptibility (ချိန် et al ။ , 2010), နှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်စည်းမျဉ်း-ခြိုးဖောကျအပြုအမူတွေ (သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007 နှင့် Qu et al ။ , 2015) ။ T ကHUS, ဆုလာဘ်နာတာရှည်ရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းအဘို့ ပြင်ဆင်. အန္တရာယ်အချက်များဖွဲ့စည်းကြောင်းအရေးကြီးသောအပြုအမူတွေကိုအလှနျသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။
4 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopaminergic reactivity ကိုတစ်အလားအလာသပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအများဆုံးကြွေသောအမြင်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ဆယ်ကျော်သက် psychopathology အတွက်တိုးအခြေခံမြီးကောင်ပေါက်ပြောင်းလဲအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကနေတဆင့် Hard-ကြိုးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသတ်ကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများဆီသို့အလားအလာဖန်တီးပေးသည်အကြံပြုထားသည်။ ဇီဝစိတ်ပိုင်းဖြတ်ဦးနှောက်နုတို့ကမောင်းနှင်ထိုသို့သောလိုငွေပြမှုရှုထောင့်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဖိအားကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့် psychopathology တစ်နေရာအနှံ့, ရှောင်လို့မရတဲ့ဆိုလို။ ထို့အပြင်ဤအမြင်ကပိုအပြုသဘောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အပြုအမူကျော်ဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာအပြုအမူတွေကိုအလေးပေးသည်။ ဒီအမြင်မမှားပေမယ့် (ဆိုလိုသည်မှာ striatal activation ကြီးထွား မ အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များဆက်စပ်), ဒီရှုထောင့်အလွန်အမင်း (ရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ် Pfeifer နှင့် Allen က, 2012) နှင့် dopaminergic reactivity ကိုဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းသပ္ပါယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့မြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူမထားဘူး။ ဒီလိုငွေပြမှုအမြင်နှင့်အတူကိုက်ညီမှုအများအပြားတွေ့ရှိချက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ် sensitivity ကိုအကြီးအကျယ်တစ်တာဝန်ယူမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် striatal reactivity ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြီးထွားသောအလားအလာသပ္ပါယ် function ကိုမီးမောင်းထိုးပြသောရှုထောင့်ကိုစိန်ခေါ်။
အဆိုပြုပြီးပါပြီတစ်ခုမှာအမြင်ကြီးထွား dopaminergic sensitivity ကိုရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဝယ်ယူမြှင့်တင်ဘို့သပ္ပါယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေကိုတိုးပွါးကြောင်း (လှံ, 2000). ချဉ်းကပ်ဖို့စိတ်သဘောထား, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်များကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်ယူလူငယ်ကသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကနေသင်ယူဖို့ရစေတယ်ကြသောအခါတစ်ကြိမ်အသစ်သောအတွေ့အကြုံများကိုမှီနှင့်၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်သူများတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုစွန့်ခွာဖို့မြီးကောင်ပေါက်မယ့်ထူးခြားတဲ့အခှငျ့အရေးရထားတဲ့သပ္ပါယ်ရည်ရွယ်ချက်ဝတ်ပြုမည်အကြောင်း (လှံ, 2000). ထို့ကြောင့် ventral striatum တုံ့ပြန်မှုဟာဆယ်ကျော်သက်ဆွေမျိုးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆီသို့ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြု, ပနျးတိုနှင့်ရေရှည်ရပ်တည်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည် (Wahlstrom et al ။ , 2010a) ။ တိုတိုပြောရရင်, ဒီစိတ်ကူးအန္တရာယ်ကိုယ်နှိုက်ယူပြီးတစ်ဦးစံတန်ဖိုးနှင့်သပ္ပါယ်အပြုအမူကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကြီးထွား ventral striatum reactivity ကို သို့ဖြစ်. နေသမျှကာလပတ်လုံးစနစ်သာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏အလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ Overdrive နှင့်မြီးကောင်ပေါက်မအဖြစ်သပ္ပါယ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သည်; အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေမြင့်မား (ခြိမ်းခြောက်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်ပင်ဘဝကိုဖြစ်နိုင်သည်လှံ, 2008) ။ ထို့အပွငျအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏အကျိုးဆက်များအခြေအနေတွင်မူတည်ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်, မြီးကောင်ပေါက် (ကားများမောင်းနှင်ဥပမာ) ယူပြီးအန္တရာယ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရှိရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ (အစားသပ္ပါယ်ရလဒ်များ၏ maladaptive ဖြစ်ပေါ်စေမည်လှံ, 2008).
အန္တရာယ်ကိုယ်နှိုက်ယူပြီးတစ်ဦးသပ္ပါယ်အပြုအမူကြောင်းသီအိုရီကျော်လွန် Moving, ငါသည် striatal reactivity ကိုအမှန်တကယ်မြီးကောင်ပေါက်ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ဟုဤကဲ့သို့သောဆုလာဘ် sensitivity ကိုအသစ်စိတ်ကူးနှင့်သပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍအဆိုပြု ကွာ အန္တရာယ်များနှင့် psychopathologies ထံမှ. ဒါက striatal reactivity ကိုပယ်ရှား DA အာရုံကြောအချက်ပြခုနှစ်တွင်ထိပ်၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းဖို့ထင်အလွန်တူညီအပြုအမူကနေဆယ်ကျော်သက်ကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီအစားအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့် psychopathology မြှင့်တင်ထက်မကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားကြီးထွားကြောင်း striatal reactivity ကိုထုတ်ဖော်ပြသအမှန်တကယ်တိုးတက်လာသောသိမှတ်ခံစားမှုဆောင်ရွက်မှုတွေပိုပြီးစဉ်းစားဟန်, အပြုသဘောအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မြီးကောင်ပေါက်ကလှုံ့ဆျော, နောက်ဆုံးမှာစိတ်ကျရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ကျန်းမာရေး-အလျှော့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်ထိရောက်သောအာရုံကြောစည်းမျဉ်းနှင့်အတူ coupled ventral striatum တုံ့ပြန်မှု, "သပ္ပါယ်အရေးယူမှုမှအပြုသဘောလှုံ့ဆျောမှု၏ဘာသာပြန်ချက်" ကိုကိုယ်စားပြုကြီးထွား ( Wahlstrom et al ။ , 2010a, စစ။ 3) ။
ကြီးထွား DA အချက်ပြထို့ကြောင့်မသက်ဆိုင်အဆိုပါရိပ်မိရလဒ် (ဆိုလိုသည်မှာ, သပ္ပါယ်သို့မဟုတ် maladaptive) ၏, ချဉ်းကပ်-related အပြုအမူတွေများအတွက် neurobiological အမှတ်အသားဖြစ်နိုင်သည်။ တဖကျတှငျ DA အချက်ပြတဲ့ရည်မှန်းချက်ဆီသို့အလုပ်လုပ်, prosocial အပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျး, ထိုကဲ့သို့သောပညာသင်နှစ်အောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ motivationally အပြုသဘောအပြုအမူတွေ (ဥပမာဆီသို့တစ်ဦးတိမ်းညွတ်အဖြစ်အလွန်အမင်းသပ္ပါယ်ဖြစ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ, ဆီသို့သည့်မည်အကြောင်း,) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, DA အချက်ပြအခြေအနေနှင့်ဆက်စပ် variable တွေကို (ဥပမာ, အန္တရာယ်ရှိတဲ့မောင်းနှင်မှုအပြုအမူတွေ, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို) ပေါ် မူတည်. အလွန်အမင်း maladaptive ဖြစ်နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေဆီသို့ဦးတည်ထားနိုင်ပါသည်။ Ventral striatum sensitivity ကိုထိုကြောင့်အားနည်းချက်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအခြေအနေတွင်ပေါ် မူတည်. အခွင့်အလမ်းဖြစ်စေကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 1) ။ T ကHUS, ventral striatum sensitivity ကိုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားလိမ့်မည်။
Ventral striatum reactivity ကိုအားနည်းချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအရင်းအမြစ်နှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
• Prosocial အပြုအမူတွေ
dopaminergic sensitivity ကိုအတွက်ထိပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တစ်လောကလုံးဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်မျိုးစိတ်အခင်းအကျင်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအနှံ့ကိုတှေ့မွငျအဖြစ်, ငါ့ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ dopaminergic sensitivity ကိုအပြုသဘော, ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်အပြုအမူတွေဆီသို့ redirected နိုင်နည်းလမ်းတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြပေးရန်ဖြစ်သည်။ အများအပြားကဆွဲဆောင်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမကြာသေးမီကဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment ရှုပ်ထွေးကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ (Crone နှင့် Dahl, 2012), နှင့် ventral striatum တစ်ခါတစ်ရံတွင်သပ္ပါယ်ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Pfeifer နှင့် Allen က, 2012) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်, ငါသညျဤစိတ်ကူးအတွက်ခြေလှမ်းထပ်မံရွှေ့နှင့် DA hyperactivation ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်နိုင်သောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အောက်တွင်ကျွန်မမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအဓိကအား maladaptive နည်းလမ်း sensitivity ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆုချသည်ဟုအစဉ်အလာအမြင်များကိုစိန်ခေါ်ကြောင်းများစွာကိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ မတူကွဲပြားနမူနာများနှင့်အခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီး, ventral striatum activation အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကျဆင်းမှုနှင့်သိမြင်မှုဇွဲနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ပေးရန်နှင့်စပ်လျဉ်းတစ်ဦးသပ္ပါယ်မြီးကောင်ပေါက် '' နျြးမာရေးအတှကျ function ကိုကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
5 ။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့်ဆုလာဘ်: ပြောင်းပြန်အခြ
လက်ရှိစာပေပြန်လည်သုံးသပ်မီ, ငါ neuroimaging ဒေတာပြန်ဆိုနှင့်အတူအနည်းငယ်ကိစ္စများမှတ်သားချင်တယ်။ လူ့ fMRI အလုပ် (တွေ့မြင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သော့ချက်ဒေသအဖြစ် ventral striatum ဖော်ထုတ်ထားပါတယ် Delgado, 2007) ။ သို့သော်ဆုလာဘ် coding အဖြစ် ventral striatum ရဲ့အနက်အရေးပါသောန့်အသတ်တစ်ခုအထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ဧရိယာ၏ activation ကနေတစ်ခုတည်းကိုသာသိမြင်မှုပြည်နယ်များ inferring ပြောင်းပြန်အခြ (ဆိုလိုသည်မှာ၏ပြဿနာဖြစ်၏ Poldrack, 2011) ။ လက်ရှိလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ခုနှစ်, ငါ ventral striatum နှင့်ဆုလာဘ်နှင့် ပတ်သက်. တော်တော်များများအခြစေမည်။ ventral striatum activation ဆက်ဆက်ဆုလာဘ်နှင့်အတူပြောရလျှင်မဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, ဒီ link တစ်ခု cogent ဇာတ်လမ်းကိုဖော်ပြအတွက်ဖြစ်စေတစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်ပေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့ ventral striatum (ဥပမာ VTA, vmPFC) နှင့်အကျိုးသည် neurochemistry dopamine ကျော်လွန်. (ဥပမာ opioids) ကုဒ်ပြင်ပအခြားအာရုံကြောဒေသများသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်, နှင့် ventral striatum sensorimotor ၏ကျယ်ပြန့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်သိမြင်မှု နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ဥပမာ, striatum မော်တာထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်နေသည် (ကြည့်ရှု Groenewegen, 2003), သင်ယူမှုအပါအဝင်အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်း (ပြေးရတာ et al ။ , 1999), ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်း (Poldrack et al ။ , 1999), နှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူခြင်း (O'Doherty, 2004), အဖြစ်ခြင်းကိုမနှစ်သက် / ပြစ်ဒဏ်မှ sensitivity ကို (Jensen et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါ striatum ထို့ကြောင့်သိမှတ်ခံစားမှု, မော်တာထိန်းချုပ်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု (တွေ့မြင်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ််ပတ်သက်နေထားပြီး Delgado, 2007).
6 ။ dopaminergic sensitivity ကိုဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်နိုင်သောသက်သေအထောက်အထား
6.1 ။ prosocial ဆုံးဖြတ်ချက်များမှ Ventral striatum sensitivity ကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်ကျဆင်းမှုခန့်မှန်း
prosocial အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်အားထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းခံစားချက်တွေကိုဆုချီးမြင့်မားပြင်းထန်မှုမြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဥပမာ, လူကြီးများအတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များပေး ventral striatum ထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါက (Moll et al ။ , 2006 နှင့် Harbaugh et al ။ , 2007) ။ ဤ (က prosocial ဖြစ်ကောင်းသောခံစားရကြောင်းအကြံပြုတစ်ဦး "နွေးအလင်းရောင်" အကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြပေးဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်Moll et al ။ , 2006) ။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့သည် (တစ်ဦး fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးစဉ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏မိသားစုမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုပေးသည့်အခါသူတို့မိသားစုကိုထောက်ပံ့သည့်အခါရက်ပျော်ရွှင်ခံစားသတင်းပို့သူကိုမြီးကောင်ပေါက် သာ. ကြီးမြတ် ventral striatum activation ပြသသောပြသကြTelzer et al ။ , 2010 နှင့် Telzer et al ။ , 2011), ပျော်ရွှင်မှုခံစားချက်တွေကိုများအတွက် ventral striatum codes တွေကို prosocial ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအယူအဆ supporting ။ prosocial ဆုလာဘ်မှ Ventral striatum activation ထို့ကြောင့်သုခချမ်းသာလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်အကြောင်းတစ်ခုသပ္ပါယ် signal ကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဒီစမ်းသပ်ဖို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးအပြုသဘော, prosocial အခြေအနေတွင်စဉ်အတွင်း striatum activation ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်းဘယ်လို ventral ဆနျးစစျဖို့တစျနှစျကျြောကာလအတှငျးမြီးကောင်ပေါက်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ မြီးကောင်ပေါက်သူတို့မိသားစုမှအကုန်အကျငွေကြေးအလှူငွေများစေနိုင်သည့်ကာလအတွင်းတစ်ဦးတာဝန်ပြီးစီး။ ကျနော်တို့သင်တန်းကျော် prosocial ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချသည့်အခါ ventral striatum အတွက်ကြီးထွား activation ပြသောမြီးကောင်ပေါက် (၎င်းတို့၏မိသားစုမှဆိုလိုသည်မှာ, အဘိုးထိုက်သောအလှူငွေ) (, ခိုးယူအရက်မသောက်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးပြီးနှင့်ကျောင်းခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်, ဥပမာ) အပြုအမူတွေကိုယူပြီးအန္တရာယ်အတွက် longitudinal ကျဆင်းမှုပြသတွေ့ရှိခဲ့ တစ်နှစ်၏ (Telzer et al ။ , 2013). ထိုမှတပါး, prosocial မိသားစုဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ် ventral striatum activation ပြသောမြီးကောင်ပေါက်ပြသ နည်းသော အန္တရာယ်-ယူပြီးတာဝန်စဉ်အတွင်း ventral striatum activation ( Telzer et al ။ , 2015a), prosocial ဆုလာဘ်အန္တရာယ်များအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏အကြိုးသဘောသဘာဝကိုထေမိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် striatum sensitivity ကိုကြောင်း activation ဖြစ်ပေါ်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်ပေါ် မူတည်. လူငယ်များအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်လို ventral မီးမောင်းထိုးပြ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးသော ventral striatum, ကြောင်း activation တစ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသော, prosocial အခြေအနေတွင်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခါလည်းဒီတူညီတဲ့အပြုအမူဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
6.2 ။ ဆုလာဘ်အမျိုးမျိုးမှ Ventral striatum sensitivity ကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစိတ်ကျရောဂါအတွက်နှစ်ဦးစလုံးတိုးနှင့်လျှောက်လျော့နည်းဟောကိန်းထုတ်
အကောင်းဆုံးသုခချမ်းသာအဓိပ္ပါယ်ရှိသောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူကတဆင့်အောင်မြင်စေခြင်းငှါနေစဉ်, မြီးကောင်ပေါက်ကိုမကြာခဏအလားအလာမကောင်းကြောင်း-ဖြစ်လျက်ရှိများအတွက်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုအားမရပိုအနုတ်လက္ခဏာ, hedonic လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာစွန့်စားမှုဆည်းပူးနေ) ဆီသို့ Oriental လေ့ (ကုန်သည်များ et al ။ , 2014 နှင့် Steinberg, 2008) ။ ကျနော်တို့ eudaimonic ဆုလာဘ် (ဥပမာမိသားစုမှ prosocial ဆုံးဖြတ်ချက်များ) နှင့် hedonic ဆုလာဘ် (ဥပမာအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များ) မှ ventral striatum activation differential စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်းခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက် (သူတို့ကသူတို့မိသားစုမှဝင်ငွေရရှိမှုလှူဒါန်းမှုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ့အတွက် prosocial တာဝန်ပြီးစီးTelzer et al ။ , 2010 နှင့် Telzer et al ။ , 2011) ။ သူတို့ကအစလုပ်ငန်းတာဝန် (ထို BART ယူပြီးတစ်အန္တရာယ်ပြီးစီးခဲ့; Lejuez et al ။ , 2002), သူတို့တစ်ဦးချင်းစီစုပ်စက်နှင့်အတူတိုးပွားလာငွေကြေးဆုလာဘ်ကိုပေးတော်မူ၏သို့သော်ပူဖောင်းဘို့မှီအားလုံးဝင်ငွေများများဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ဆိုအမှတ်မှာပေါက်ကွဲနိုင်မယ့်ကို virtual ပူဖောင်းတက်သွားနိုင်သည့်ကာလအတွင်း။ ရလဒ်များ၎င်းတို့၏မိသားစုမှ prosocial ဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်အတွင်းမြင့် ventral striatum activation ပြသောမြီးကောင်ပေါက်နောက်တစ်နှစ်၏သင်တန်းကျော်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက် longitudinal ကျဆင်းမှုကြုံတွေ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, တာဝန်ယူပြီးအန္တရာယ်စဉ်အတွင်းမြင့် ventral striatum activation ပြသော prosocial တာဝန် (ဆိုလိုသည်မှာ, တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ) အပေါ်မိမိတို့အဘို့င်ငွေကိုစောင့်ရှောက်ရသောအခါ ventral striatum activation ကြီးထွားပြခဲ့သူမြီးကောင်ပေါက်သို့မဟုတ် (စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက် longitudinal တိုးကြုံတွေ့Telzer et al ။ , 2014) ။ နှင့်စိတ်ကျရောဂါ symptomology အတွက်ကျဆင်းမှုမှဦးဆောင်; ထို့ကြောင့်အလားအလာအပြုသဘောဆုလာဘ်ဆီသို့တစ်ဦးတိမ်းညွတ်များအတွက် codes တွေကို (လူမှုရေးအရချိတ်ဆက် feeling ဥပမာအဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသဘောမျိုး feeling) တစ်ဦး neurobiological signal ကိုများအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် prosocial အပြုအမူမှ striatal activation တစ်ဦးသပ္ပါယ်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်ကြီးထွား ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (ဆိုလိုသည်မှာမိမိကိုယ်ကိုအဘို့ပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်ခြင်း) စဉ်အတွင်း striatal တုံ့ပြန်မှုကြီးထွားသို့မဟုတ်အန္တရာယ်များဖြစ်ခြင်းတစ် maladaptive အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုသောအခါအလားအလာပိုပြီးအပျက်သဘောဆုလာဘ် (ဥပမာအန္တရာယ်များဖြစ်ခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဆီသို့တစ်ဦးတိမ်းညွတ်များအတွက် codes တွေကိုတစ် neurobiological signal ကိုအဖြစ်ခံလျက်, လူမှုရေးကြီးထွား ခြိမ်းခြောက်မှု) နှင့်စိတ်ကျရောဂါ symptomology အတွက်တိုးမြှင့်အတွက်ရရှိလာတဲ့။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် ventral striatum activation ဖြစ်ပေါ်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစား၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
6.3 ။ မိခင်ရှိနေခြင်းကွာအန္တရာယ်များအပြုအမူကနေဆယ်ကျော်သက် ventral striatum sensitivity ကိုပြန်ညွှန်း
မိဘများအသပ္ပါယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေနှင့်အန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားရန်သူတို့သားသမီးကူညီပေးနေ, အရေးပါသောငြမ်းအခန်းကဏ္ဍ။ မိဘများငါတို့သည်မျှသာတံခါးစောင့်အဖြစ်အမှုဆောင်နှင့်ဆင်းရဲသောဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်မြီးကောင်ပေါက် '' အခွင့်အလမ်းကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေလျော့ကျစေခြင်းငှါနေစဉ် မိခင်ရှိနေခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအန္တရာယ်များ adolescents ထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းများကိုပြောင်းလဲရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ တစ်ဦး fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်သူတို့အန္တရာယ်များသို့မဟုတ်လုံခြုံဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည့်ကာလအတွင်းတစ်ဦး simulated မောင်းနှင်မှုတာဝန်ပြီးစီး။ သူတို့က task ကိုတစ်ဦးတည်းနှင့်၎င်းတို့၏မိ၏ထံတော်၌ကစားခဲ့။ ကျနော်တို့တဲ့အခါမှာတစ်ဦးတည်းမြီးကောင်ပေါက်သူတို့ရဲ့မိခင်ပစ္စုပ္ပန်အခါထက် (ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ 55%) သိသိသာသာပိုပြီးအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များဖွဲ့သော (ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ 45%) တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက် '' မိခင်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြသည်အခါအာရုံကြော level မှာ, အ ventral striatum လုံခြုံဆုံးဖြတ်ချက်များကာလအတွင်းသိသိသာသာလျော့နည်းအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်အတွင်း activated နှင့်ပိုပြီးတက်ကြွခဲ့သည် (Telzer et al ။ , 2015b) ။ အရေးကြီးတာကကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်လုံခြုံဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဖန်ဆင်းသည့်အခါသူတို့တစ်ဦးတည်းသောအခါ၎င်းတို့၏မိခင်များမဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသော်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခါ, သူတို့ ventral striatum နှင့် ventrolateral prefrontal cortex (VLPFC) အကြားသိသာထင်ရှားသောအလုပ်လုပ်တဲ့နားချင်းဆက်မှီ (အာရုံကြောဒေသများအကြားဆိုလိုသည်မှာ Cross-ဟောပြောပွဲ) ပြသကြောင်းတွေ့ရှိရ ။ ငါဎမိမိတို့၏အမိ၏ထံတော်၌ဘေးကင်းလုံခြုံဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနဲ့အခြားစကားလုံးများ, ဆုလာဘ်တန်ဖိုး codes တွေကို (ဆိုလိုသည်မှာ, လုံခြုံဆုံးဖြတ်ချက်များကို ventral striatum စေ့စပ်), ဤဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု prefrontal cortex ၏ activation ကိုအားပေးအားမြှောက်, ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ key ကိုဦးနှောက်ဒေသတစ်ခုအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူစေခြင်းငှါ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်မော်တာတုံ့ပြန်မှုများ၏ဘရိတ် (မီးခိုးရောင် et al ။ , 2002 နှင့် Wessel et al ။ , 2013) အဖြစ်အုပ်စိုးမှုကိုယ်စားပြုမှုနှင့်တုန့်ပြန်ရွေးချယ်ရေး (Souza et al ။ , 2009 နှင့် Snyder et al ။ , 2011) ။ ထို့ကြောင့် striatal တုံ့ပြန်မှုနောက်ဆုံးမှာဘေးကင်းလုံခြုံရွေးချယ်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, တုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တမင်လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏သီအိုရီမြင့် ventral striatum sensitivity ကိုအကြီးအကျယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအခြေခံများနှင့်ကြိုတင်အလုပ် striatal sensitivity ကို maladaptive, အန္တရာယ်များအပြုအမူမှဦးဆောင်သည့်အတွက်အခင်းအကျင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မူကြောင်းကိုတင်ပြသည်။ အရေးကြီးတာက, ဥပမာ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သော ventral striatum, ရွယ်တူချင်းပစ္စုပ္ပန်အခါ (ချိန် et al ။ , 2011), ကွာအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များ (အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေစဉ်အတွင်းဆိုလိုသည်မှာလျော့နည်း activation) မှနှင့်ပိုပြီးဆီသို့ redirected နိုင်ပါသည် deliberative နှင့်အန္တရာယ်ကင်းဆုံးဖြတ်ချက်များမိခင်များပစ္စုပ္ပန်အခါ။
6.4 ။ Extrinsic နှင့်အခ်ါဆုလာဘ်ကြီးထွား ventral striatum activation မှတဆင့်တိုးတက်လာသောသိမြင်ဇွဲမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်
မြီးကောင်ပေါက်ဥပမာ (အထူးသဖြင့်အလွန်အမင်းနှိုးဆွသောသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအတွက်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ထိခိုက်ပြသလေ့ရှိသျောလညျး, ယုန် et al ။ , 2008 နှင့် Somerville et al ။ , 2011), သူတို့အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအဘို့ဆုခခြဲ့ကြသောအခါမြီးကောင်ပေါက်အမှန်တကယ် (ဆိုလိုသည်မှာ prepotent တုံ့ပြန်မှုတားစီး) တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်ပြသ (Geier နှင့် Luna, 2009, Geier နှင့် Luna, 2012, Geier et al ။ , 2010 နှင့် Padmanabhan et al ။ , 2011) ။ လိမ္မာပါးနပ်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးမှာတော့ Geier နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသင်တန်းသားများကိုရိုးရှင်းတဲ့သိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန် (antisaccade တာဝန်) ဖြည့်စွက်ခြင်း, အချို့သောစမ်းသပ်မှုတွေပေါ်ကောင်းသော inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတစ်ငွေကြေးဆုလာဘ်လြှော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက် (အရွယ်ရောက်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြားနေစမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်ဆုခခြံပေါ်နည်းပါးလာအမှားအယွင်းများလုပ်Padmanabhan et al ။ , 2011), ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်မှအထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ် extrinsic လှုံ့ဆျောမှု (ဆိုလိုသည်မှာ) ပိုက်ဆံရတဲ့သူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ အရေးကြီးတာက, ထိုအာရုံကြောအဆင့်မှာ, မြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါဆုခခြံစမ်းသပ်မှုတွေ (ပေါ်တွင် ventral striatum အတွက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင့် activation ပြPadmanabhan et al ။ , 2011), extrinsic ဆုလာဘ်များနှင့် ventral striatum activation မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အမူအကျင့်စည်းမျဉ်းတိုးတက်စေရန်ပြုမူဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
Iဎ (ဆိုလိုသည်မှာငွေကိုလက်ခံရရှိ) extrinsic လှုံ့ဆျောမှုကိုဆန်းစစ်ဖို့အပြင်, သုတေသီများ striatal activation နှင့်တိုးမြှင်အပြုအမူစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါဘယ်လိုအခ်ါလှုံ့ဆျောမှုဆနျးစစျဖို့ဆည်းကပ်ကြပါပြီ. Satterthwaite နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2012) အဆိုပါ ventral striatum 8 ထံမှ 22 နှစ်အသက်အရွယ်အတွင်းရှိအထိသင်တန်းသားများအကြားအခက်အခဲအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်နဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တာဝန်စဉ်အတွင်း activated ခံခဲ့ရပုံကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မှန်ကန်စွာ task ကိုဖြည့်သည့်အခါအဆိုပါစာရေးဆရာတစ်ဦးမြင့် ventral striatal တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အခ်ါလှုံ့ဆျောမှုသတ်မှတ်ပါတယ်။ Satterthwaite နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2012) အလုပ်တခုကိုအခက်အခဲနှင့်အတူခဲ့သည်ဆို၏ကြောင်းကြံ့ခိုင် ventral striatum activation တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကသင်တန်းသားများကိုမမှန်ကန်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်မှန်ကန်သောလုပ်သောအခါ, မြင့် ventral striatum activation ပိုပြီးခက်ခဲစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အမြင့်မားခဲ့ကြောင်း striatum activation ပြသသည်။ စိန်ခေါ်မှုတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်း ventral striatum activation ကိုပိုမိုထိရောက်သောအလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဥာဏ်ကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းအကြံပြုတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဒါက striatal activation ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကဤအခ်ါဆုလာဘ်မှအမြင့်ဆုံး ventral striatum activation ပြသခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာကအဲဒီ striatal တုံ့ပြန်မှုဤအခြေအနေတွင် ventral striatal တုံ့ပြန်မှုအခ်ါအားဖြည့်အချက်ပြမှုများကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတုံ့ပြန်ချက်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်များမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းလက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအခ်ါအတွက်မဟုတ်ဘဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုထက်ဆယ်ကျော်သက်ထိပ်ကိုသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးရလာဒ်များအကြားရှိပါတယ်။
၏လုပျငနျးအပေါ်အောက်ပါ Satterthwaite နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2012)ကျနော်တို့အခ်ါလှုံ့ဆျောမှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်အတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ရှာ၏။ ဒီအဆုံးကျနော်တို့အစဉ်အလာဟာသူတို့ရဲ့ Self-အစီရင်ခံအခ်ါကျောင်းကလှုံ့ဆျောမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားခြားနားသောသူနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်နှစ်ခုနမူနာစုဆောင်း။ အရှေ့အာရှမြီးကောင်ပေါက် (သူတို့ရဲ့အမေရိကန်များထက်ပညာရှင်များပိုမိုလှုံ့ဆော်ဖြစ်လေ့Pomerantz et al ။ , 2008) နှင့်မိမိတို့၏အမေရိကန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု, အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အမူအကျင့်တားစီးပေါ်တွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်း (Sabbagh et al ။ , 2006 နှင့် Lan et al ။ , 2011) ။ သူတို့အချိန်ကျော်ဇွဲလိုအပ်မယ့်အခြေခံသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန် (Go-Nogo တာဝန်) တွင်စေ့စပ်အဖြစ် ventral striatum activation အရှေ့အာရှကျောင်းသားများ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုထောကျပံ့နိုငျသရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့အမေရိကန်နှင့်တရုတ်ကျောင်းသားများက scan ဖတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ပြန် ventral striatum ၏သပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍဆီသို့ညွှန်ပြ။ ကျနော်တို့တရုတ်နှင့်အမေရိကန်ကျောင်းသားများအသိမြင်မှုထိန်းချုပ်အလားတူအဆင့်ဆင့်အကြံပြု, task ကိုရဲ့အစမှာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကွာခြားမထိုကဲ့သို့သော, ထိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်အနှံ့အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ကျောင်းသားများအစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းမှုပြသသော်လည်းသို့သော်အချိန်ကိုဖြတ်ပြီး, တရုတ်ကျောင်းသားများကစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုပြသ (Telzer နှင့် Qu, 2015). အမေရိကန်သင်တန်းသားများကို '' ventral striatum activation task ကိုကျော်အနိမ့်ကျန်ရစ်သော်လည်းအဆိုပါအာရုံကြောအဆင့်မှာ, တရုတ်သင်တန်းသားများ, task ကို၏သင်တန်းကျော်တိုးမြှင့် ventral striatum activation သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တရုတ်ကျောင်းသားများ, အချိန်ကိုဖြတ်ပြီးအမေရိကန်ကျောင်းသားများအတွက်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းဆက်သွယ်မှုပု ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားတိုးပွားလာ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု သာ. ကြီးမြတ် VS-PFC ဆက်သွယ်မှုသိမြင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်တိုးတက်မှု facilitated ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, task ကိုအပေါ်အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ventral striatum အဆိုပါ PFC ပိုပြီးထိရောက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထုတ်ယူကြောင်းအခ်ါအားဖြည့်အချက်ပြမှုများကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အဆိုပါ ventral striatum function ဟာ PFC နှင့်အတူဒွန်တွဲခဲ့ကွောငျးတရုတ်ကျောင်းသားများအကြားသိမြင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်တိုးတက်မှုမိခင်များ၏ရှေ့တော်၌အယူဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစွန့်စားမှုအပေါ်အထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဆင်တူသူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, တိုးမြှင်တစ်ဦးအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုကနေတဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် striatal reactivity သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တရုတ်ကျောင်းသားများက '' လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်တစ်ဦးသပ္ပါယ် function ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းအခ်ါလှုံ့ဆျောမှုကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ neurobiological အချက်ပြပါလိမ့်မယ်။ အတူတူ၏လုပျငနျးနှင့်အတူ Satterthwaite et al ။ (2012)ဤတွေ့ရှိချက်များတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုပိုပြီးကြိုးရှာတွေ့သည့်အခါပညာရေးအောင်မြင်မှုတိုးတက်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
6.5 ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစဉ်အတွင်းတိုးလာ striatal reactivity ကိုအပြုသဘောသက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများခန့်မှန်း
တစ်ဦးလိမ္မာပါးနပ်ကိုင်တွယ်, Falk ခုနှစ်တွင်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (Cascio et al ။ , 2014) အာရုံကြောဖြစ်စဉ်များမြီးကောင်ပေါက်အတွက်နောက်ပိုင်းမှာအပြုအမူတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံကိုဆနျးစစျဖို့ဦးနှောက်-အဖြစ်-ခန့်မှန်းမူဘောင်အကောင်အထည်ဖော်။ တစ်ဦး fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အခြေခံသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန် (Go-Nogo တာဝန်) ပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါစကင်ကိုအောက်ပါတစ်ခုမှာအပတ်ကမြီးကောင်ပေါက်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုံခြုံပြီးအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပါစေနိုင်သည့်ကာလအတွင်းတစ်ဦး simulated မောင်းနှင်မှု session ကိုခံယူဖို့ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပြန်သွား၏။ မြီးကောင်ပေါက်မယ့် high- သို့မဟုတ် Low-အန္တရာယ်သက်တူရွယ်တူဖြစ်စေ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်ပုံရိပ်စစ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ အပြုအမူ, မြီးကောင်ပေါက်သိသိသာသာနည်းပါးလာအန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုလုပ် High-အန္တရာယ်ရွယ်တူချင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်အန္တရာယ်ရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌ (ဆိုလိုသည်မှာ, အနီရောင်မီးလုံးတွေနဲ့လမ်းဆုံမှတဆင့်မောင်း) ။ အဆိုပါအာရုံကြောအဆင့်တွင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပါဝငျသညျ့အခါ ventral striatum အတွက်အတော်လေး သာ. ကြီးမြတ် activation ပြသသူကိုမြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုသူတို့ရဲ့သတိထားရွယ်တူကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောကြောင်း သာ. ကြီးမြတ် ventral striatum activation သတိထားရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌နည်းပါးလာအန္တရာယ်များမြားတှငျပါဝငျခွငျးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ Ventral striatum activation အန္တရာယ်များရွယ်တူကလွှမ်းမိုးခံရခြင်းနှင့်အတူသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးတည်းအပြုအမူကားမောင်းဖို့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤအတွေ့ရှိချက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစဉ်အတွင်း ventral striatum ၏မြီးကောင်ပေါက် '' စုဆောင်းမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုသတိထားရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏သက်ရောက်မှု buffering နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အရေးကြီးတာက, ကြီးထွား ventral striatum activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် နည်းသော စွန့်စားမှု, prosocial သော်လည်းမအန္တရာယ်များရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌အပြုအမူယူပြီး striatal reactivity ကို၏သပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍ၏နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားပေး။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုတရုတ်ကျောင်းသားများအကြားသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစဉ်အတွင်းမြင့် ventral striatum activation တွေ့ရှိခဲ့ရသောအထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် (နှင့်ကိုက်ညီများမှာ Telzer နှင့် Qu, 2015) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုများတွင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစဉ်အတွင်း ventral striatum activation သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်နှင့် Cascio et al ။ (2014) VS တုံ့ပြန်မှုရွယ်တူများ၏အပြုသဘောဆောင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြှင့်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြီးထွားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာ ventral striatum အကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှု်ထမ်းဆောင်နေသည်ရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးနေစဉ်, သက်ရောက်မှုများကိုမည်သို့ပင်ဆိုစေအဆိုပါ ventral striatum တစ်ဦးသပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်များသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပို ventral striatum စုဆောင်းတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းပိုပြီးထိရောက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အပြုအမူကိုယူပြီးလျော့နည်းအန္တရာယ်အတွက်ရရှိလာတဲ့, သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌ပိုပြီးသပ္ပါယ်အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက်ထပ်မံ ventral striatum activation ဖြစ်ပေါ်ရသောအခြေအနေကစကားစပ်နားလည်သဘောပေါက်အလေးပေး။
6.6 ။ တိုးမြှင့် striatal reactivity ကိုတစ်ဦးစည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍထမ်းဆောင်နိုင်
အခွားသောလုပျငနျး ventral striatum လည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါပြတော်မူပြီ။ တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှု၌, Pfeifer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2011) ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းလူငယ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုဘယ်လိုဆန်းစစ်ဖို့နှစ်ကြိမ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေခဲ့သည် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားစိတ်ခံစားမှုမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ ventral striatum reactivity ကိုအတွက် longitudinal တိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန် longitudinal အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်လျှောက်လျော့နည်းအဖြစ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်ကျဆင်းမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ. Pfeifer et al ။ (2011) ထို့အပြင်ကြောင်းအကြံပြု, စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာများ processing အခါ ventral striatum အဆိုး function ဟာ amygdala နှင့်အတူဒွန်တွဲခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ ventral striatum စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွဖို့မြင့် amygdala တုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိခြင်းနှင့်လြော့ဖို့အစေခံစေခြင်းငှါ။ အခြားသူများကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုနမူနာ (မှာရှိတဲ့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု၏သိမြင်မှု reappraisal စဉ်အတွင်း ventral striatum activation လည်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီMcRae et al ။ , 2012), နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းထဲမှာ striatum တစ်အခန်းကဏ္ဍမီးမောင်းထိုးပြ။ အဆိုပါ ventral striatum ရဲ့စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍ၏ပြောသောစကားကိုသက်သေအထောက်အထားအတွက်, Masten နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2009) တွေ့ရှိခဲ့ လူမှုရေးဖယ်ကာလအတွင်းကြီးထွား ventral striatum တက်ကြွစွာ ventral striatum အနုတ်လက္ခဏာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိခိုက်စေထိန်းညှိဘို့အလွန်အရေးပါဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း, လြော့ Self-အစီရင်ခံစိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် "လူမှုရေးနာကျင်မှု" အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လျော့နည်း activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားသည် ventral striatum အပြုသဘောဆောင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသို့အနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံများ၏ reappraisal အတွက်အကူအညီပေးဖို့အစေခံစေခြင်းငှါ (Masten et al ။ , 2009 နှင့် အာမခံ et al ။ , 2009). တနည်းကား, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း striatal reactivity ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းဘုံအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဆန့်ကျင်နေတဲ့စွန့်စားမှုအချက်ကိုယ်စားပြုဤတွေ့ရှိချက် striatum တစ်ဦးသပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အထူးသစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းထဲမှာ ဆက်စပ်. အ။
6.7 ။ အကျဉ်းချုပ်
အတူတကွဤလေ့လာမှုများကြီးထွား ventral striatum activation သိမြင်ဇွဲနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတိုးမြှင့်ခြင်း, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာလျော့ကျလာခြင်းဖြင့်သပ္ပါယ်ဖွစျနိုငျကွောငျးကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိ Conceptual အလေးပေးအဖြစ်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များတစ်အမှတ်အသားနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်သုတေသန ventral striatum activation လည်းဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အပြုသဘော, သပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍအစေခံနိုငျကွောငျးဖျောပွသညျ။ လေ့လာမှုအများစုကြီးထွား striatal မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် activation (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်စည်းမျဉ်း-ခြိုးဖောကျအပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောလိုငွေပြမှုအစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်, Jager et al ။ , 2013, Telzer et al ။ , 2014, ပိုး et al ။ , 2013, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007, ဘား-Haim et al ။ , 2009, Guyer et al ။ , 2006 နှင့် Qu et al ။ , 2015), ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်စာပေတစ်ခုလန်းလာသောခန္ဓာကိုယ် ventral striatum တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားသည်။ အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီး, အ ventral striatum အပြုသဘောအမူအကျင့်ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အထူးသဖြင့်, ventral striatum activation prosocial ဆုံးဖြတ်ချက်ချမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအခင်းအကျင်းတစ်ခုသပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍဝတ်ပြုမည်အကြောင်း (Telzer et al ။ , 2013 နှင့် Telzer et al ။ , 2014), သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး (Telzer နှင့် Qu, 2015, Cascio et al ။ , 2014 နှင့် Padmanabhan et al ။ , 2011), အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (Satterthwaite et al ။ , 2012), စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း (Pfeifer et al ။ , 2011 နှင့် Masten et al ။ , 2009), သို့မဟုတ်အရာကိုယ့်အစားအနှုတ်လက္ခဏာလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အပြုသဘောဆောင် nclude (Telzer နှင့် Qu, 2015 နှင့် Cascio et al ။ , 2014). အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများအတွက်တိကျသောတိုင်းတာအပေါ်အခြေခံပြီး, ကအစီရင်ခံသည်အဆိုပါ ventral striatal Active အကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုယ်စားပြုနေကြသည်ရှိမရှိနှုန်း se ထင်ရှားမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ striatum ထိုကဲ့သို့သောသင်ယူမှုအဖြစ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကျော်လွန်အပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါသောကြောင့်, striatal တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအချို့အန္တရာယ်များအခင်းအကျင်းနှိုင်းယှဉ် prosocial မှသင်ယူမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီခြားနားချက်များကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အမှန်မှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အရေးပါသောအသှငျအပွငျ (ကအများအပြားအသစ်သောအပြုအမူများနှင့်အခင်းအကျင်းကြုံတွေ့နေကြသည်နှင့်အသစ်အပြုအမူပုံစံများကိုဝယ်ယူကြသောအခါအချိန်ဖြစ်ပါတယ်Dahl, 2008) ။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသနသည်ဤကွဲပြားခြားနားအခင်းအကျင်းဖြတ်ပြီး ventral striatum ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှု disentangle သငျ့သညျ။
7 ။ ကျနော်တို့သပ္ပါယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများအတွက်ဆယ်ကျော်သက် ventral striatum sensitivity ကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သလား?
မျိုးစိတ်အခင်းအကျင်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအနှံ့ကိုတှေ့မွငျအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Ventral striatal reactivity ကို, တစ်လောကလုံးဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopaminergic activation အတွက်ထိုကဲ့သို့သောထိပ်အပြုအမူတွေတစ်အကွာအဝေးသို့သည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် deviant ရွယ်တူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖြစ်ပြဿနာလှုပ်ရှားမှုများဆီသို့ညွှန်ကြားလျှင်တဦးတည်းလက်တွင်, ဤကြီးထွား ventral striatum reactivity ကိုအမှန်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုကဲ့သို့သော prosocial အပြုအမူတွေသို့မဟုတ်ဝါသနာ, အပြုသဘောလူမှုရေးဆက်ဆံရေးကို, သို့မဟုတ်ကျောင်းအတွက်လှုံ့ဆော်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်လှုပ်ရှားမှုများဆီသို့ညွှန်ကြားလျှင်, ဒီကြီးထွား ventral striatum reactivity ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်နှင့်စိတ်မချရသောကျန်းမာရေးကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ချဉ်းကပ် adolescents နှင့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းတွေကသူတို့ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းများအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ အရေးကြီးတာက, ဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများအသီးအသီးတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, အားလုံးမဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်မြင့် striatal activation ပြသလျက်နှင့်မသည်ဤအခင်းအကျင်းအားလုံးကို striatal activation သပ္ပါယ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ခြင်း prosocial အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်စိတ်ကျရောဂါ (အတွင်းအကြီးမြတ်ဆုံးကျဆင်းမှုပြသတဲ့အခါမှာအကြီးမြတ်ဆုံး ventral striatum activation ပြသောမြီးကောင်ပေါက်Telzer et al ။ , 2013 နှင့် Telzer et al ။ , 2014); သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကာလအတွင်းအကြီးမြတ်ဆုံး ventral striatum activation ပြသောမြီးကောင်ပေါက် (သိမြင်ဇွဲအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးတိုးတက်မှုပြသTelzer နှင့် Qu, 2015) နှင့်အများဆုံးလျော့နည်းအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဟာသူတို့ရဲ့ prosocial ရွယ်တူကလွှမ်းမိုးခဲ့သည် (Cascio et al ။ , 2014); ခက်ခဲတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်တာဝန်စဉ်အတွင်းအကြီးမြတ်ဆုံး ventral striatum activation သရုပ်ပြသူကိုမြီးကောင်ပေါက် (အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခဲ့Satterthwaite et al ။ , 2012); နှင့်စိတ်ခံစားမှု processing သည့်အခါ ventral striatum activation အတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးတိုးမြှင့်ပြသသူကိုမြီးကောင်ပေါက် (အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးကျဆင်းမှုပြသPfeifer et al ။ , 2011). ဤရွေ့ကားတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကဤထက်ပိုသောသပ္ပါယ် ventral striatum တုံ့ပြန်မှုကိုပြသသူကိုမြီးကောင်ပေါက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ မြီးကောင်ပေါက်တန်ဖိုးကိုဒီအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးမရှိပါက prosocial အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မြီးကောင်ပေါက်တွန်းအားပေးထိရောက်သောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်အများဆုံးတန်ဖိုးကို adolescents သောအထူးသဖြင့်အပြုအမူတွေနဲ့ကိလေသာဖော်ထုတ်နှင့်ထိုလှုပ်ရှားမှုများမှသူတို့ကိုညွှန်ကြားကူညီအများဆုံးအကျိုးရှိခြင်းနှင့်တည်မြဲရလဒ်များရှိနိုင်ပါသည်။
ဝေးကျန်းမာရေး-အလျှော့အပြုအမူတွေကနေသပ္ပါယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် directing အဖြစ် ventral striatum sensitivity ကိုဒီမြင်ကွင်းကိုဆယ်ကျော်သက်အကြားထိရောက်သောစိတ်ကျရောဂါ၏အထက်သို့ဘယ်နေရာတွေမှာလဲကာကွယ်တားဆီးဖို့ကုသမှုနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအားထုတ်မှု, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းနှုန်းထားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် လူဦးရေ။ မြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမို maladaptive အပြုအမူတွေ (ဆီသို့ Oriental လေ့နိုင်ပေမဲ့Steinberg, 2005), သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသုတေသနအားထုတ်မှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဖြစ်သင့်မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများအတွက်မြီးကောင်ပေါက် '' မြင့် ventral striatum sensitivity ကိုအခွင့်ကောင်းယူမယ့်နည်းလမ်းတွေဖော်ထုတ်။ ကြောင်းကွာအန္တရာယ်ကနေနှင့်အခွင့်အလမ်းဆီသို့မိမိတို့၏မြင့် ventral striatum sensitivity ကိုညွှန်ကြားရန်, ဖြစ်ပါသည် - ဆရာများ, မိဘ, ဆရာမျက်နှာသာဆယ်ကျော်သက်အတွက်ချိန်ခွင်လျှာဖို့ကြိုးစားမယ့်အလယ်ပိုင်းရည်မှန်းချက်အဖြစ်မြင်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ, စခွေငျးငှါဤစနစ်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောအားဖြင့်လမ်းကြောင်းခိုင်ခံ့စေခြင်း, ကြီးထွား ventral striatum reactivity ကို၏အနုတ်လက္ခဏာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွက်ရရှိနိုင်မှုသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒလျော့ကျလာ, သူတို့ရဲ့ကြီးထွား ventral striatum reactivity ကို၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ရှုထောင့်ဆီသို့မြီးကောင်ပေါက်ကိုညွှန်ကြားဖို့ပိုနည်းလမ်းရှာနိုင်လျှင် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သေဆုံးမှုနှင့်ရောဂါနှုန်းထားများလျှော့ချပေးပါတယ်။
8 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် ventral striatum reactivity ကို၏ရှုပ်ထွေး
8.1 ။ ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့ထောက်ပံ့ functional သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော
ရေပန်းစားအမြင်အပြုအမူတွေကိုရှာကြံဆုလာဘ်အတွက်ထိပ်အကြီးအကျယ်အနုတ်လက္ခဏာအပြုအမူဆီသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် orienting တစ်ဦးအားနည်းချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းအကြံပြုနေစဉ်, ventral striatum activation များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ်ပာယျအခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့် ventral striatum တစ်ဦးပိုမိုပျော့ပြောင်းနားလည်မှုလိုအပ်ပေသည်။ အခြို့သောအခင်းအကျင်းအတွက် ventral striatum reactivity ကို maladaptive ဆုလာဘ်ရှာအချက်ပြစေခြင်းငှါနေစဉ်အခြားအခင်းအကျင်းအတွက် striatum ထိုကဲ့သို့သော motivationally အပြုသဘောအပြုအမူတွေ (ဆီသို့တစ်ဦးတိမ်းညွတ်အဖြစ်တာအန္တာရာယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလွန်အမင်း adapter နဲ့မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုချဉ်းကပ်-related အပြုအမူတွေ, များအတွက် neurobiological signal ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ ဥပမာ) တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဆီသို့အလုပ်လုပ်, ပညာရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်, ventral striatum activation ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ်ပာယျကဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်နှင့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပါသည်။
Iဎများအပြင်, ventral striatum activation က coupled သောဒေသများပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ်ပာယျရှိစေခြင်းငှါ. ဒါကကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုစဉ်အတွင်းဖြစ်ပါသည်, ထို ventral striatum ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများနှင့်အတူပူးတွဲတက်ကြွစေခြင်းငှါ။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းရာသည်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက် VS ဆွေးနွေးပွဲတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ် disentangle နိုင်ပါတယ်ရန်။ အများဆုံးကြိုတင်သုတေသနပြု ventral striatum တက်ကြွသို့မဟုတ်မဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ် ventral striatum အပြုအမူတွေအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်ရှိမရှိရှိမရှိအပေါ်အာရုံစိုက်နေစဉ်, က ventral striatum differential အခြေအနေတွင်တစ် function ကိုအဖြစ်ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူဒွန်တွဲနေသည်ရှိမရှိအထုပ်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ကွဲပြားအပြုအမူတွေကိုထပ်ဆင့် prefrontal cortex (PFC) နှင့်အတူ ventral striatum ၏ပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ပေမယ့် function အသားအရောင်ခွဲခြားလမ်းကြောင်း (အလက်ဇန်းဒါး et al ။ , 1986, di Martino et al ။ , 2008 နှင့် Postuma နှင့် Dagher, 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထပ်နေသည်ကိုနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရဲ့ရှုပျထှေးသောပုံစံများကွဲပြားခြားနားသော cortical နှင့် subcortical ရင်းမြစ်များမှ afferents အကြားတည်ရှိနေ။ အဆိုပါ ventral striatum အစဉ်အလာ orbitofrontal cortex (OFC) အပါအဝင်အကျိုးသက်ရောက်စေဖြစ်စဉ်များအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရအာရုံကြောဒေသများထံမှ afferents, dorsal anterior cingulate cortex, ventromedial PFC, amygdala နှင့် hippocampus (ဥပမာအားလက်ခံတွေ့ဆုံ Haber နှင့် Knutson, 2010 နှင့် Pennartz et al ။ , 2011; မြင် Delgado, 2007). ထို့ကြောင့် ventral striatum သည်အခြားအာရုံကြောဒေသများနှင့်အတူဆက်သွယ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်သည့် ventral striatum တစ်တာဝန်ယူမှုအဖြစ်ဒါပေမယ့်လည်းအခွင့်အလမ်းအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအားဝတျပွုနိုငျပုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်အစီရင်ခံတချို့ကတွေ့ရှိချက်ကဒီစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့။ ဥပမာအားဖြင့်အခါတစ်ဦးတည်းအန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအောင် (Telzer et al ။ , 2015b) သို့မဟုတ်ရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌ (ချိန် et al ။ , 2010), အ ventral striatum သိသိသာသာတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။ အမိ၏ထံတော်၌ဘေးကင်းလုံခြုံရွေးချယ်မှုအောင်သည့်အခါသို့သော်သည်, ventral striatum (တစ်ဦးတည်းလုံခြုံရွေးချယ်မှုအောင်သည့်အခါပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ကြောင်း VLPFC, ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးကနေတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ပုံTelzer et al ။ , 2015b) ။ ထို့ကြောင့်, ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းဖြတ်ပြီး ventral striatum နှင့်အတူအွန်လိုင်းလာသောဒေသများဆန်းစစ် ventral striatum activation ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နားလည်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ventral striatum reactivity ကိုက VLPFC activation နှင့်အတူတွဲဖက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခါသပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော amygdala အဖြစ် limbic activation နှင့်အတူတွဲဖက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ maladaptive ဖြစ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသန functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုဆန်းစစ်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
8.2 ။ ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့ထောက်ပံ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော
ပေးထားသောဆုလာဘ်ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းဆဲလ်အမျိုးအစားအဆိုပါသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအဆိုပါ ventral striatum အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမတူညီတဲ့သက်ရောက်မှုများအတွက်အခြားဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာထို ventral striatum တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ (အခြေခံအဆောက်အဦးသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောငျဒသေသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ , ကြွက်, မျောက်ဝံများနှင့်လူသားမြားသညျအတူခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝကမ္မ, immunohistochemical နှင့် pharmacological လေ့လာမှုများအပေါ် အခြေခံ. (ဥပမာ Cardinal et al ။ , 2002, Koya et al ။ , 2009, Pennartz et al ။ , 1994 နှင့် Voorn et al ။ , 1989), အ VS (က monolithic ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ပြုမူပါဘူးထို့ကြောင့်တိကျတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူအာရုံခံ၏ Spatial ကွဲပြား ensembles ထားရှိရေးစခွေငျးငှါKalenscher et al ။ , 2010) ။ အမှန်မှာထို striatum ကွဲပြားဓာတုရေးစပ်သီကုံးများနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်သောတစ်ရှူးငျဒသေလွှမ်းခြုံနှင့်အထူးသဖြင့်အတွင်း ventral striatum (ဥပမာ dorsal striatum ကဲ့သို့သောအခြားဒေသများထက် neurochemical စနစ်များကိုပိုမိုကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးရှိပါတယ်Holt et al ။ , 1997) ။ အဆိုပါ ventral striatum အတွင်းမှာပဲသည်နျူကလိယ accumbens shell ကို, core ကိုနှင့် rostral တိုင်နယ်မြေများအပါအဝင်သုံးငျဒသေသို့ခွဲခြားထားပြီး (Zaborszky et al ။ , 1985 နှင့် Meredith et al ။ , 1993) ။ ဤသုံးပါးငျဒသေမြားအတှငျးအပိုဆောင်းကွဲပြားခြားနားမှုဓာတုအမှတ်အသားများ၏သိပ်သည်းဆနှင့်ဆက်သွယ်မှုများဖြန့်ဖြူး (အပါအဝင်တည်ရှိHolt et al ။ , 1997) ။ ထို့အပွငျအနီးကပ် limbic စနစ်နှင့် ပတ်သက်. striatum ရဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း (အစဉ်အလာဟာနျူကလိယ accumbens စဉ်းစားသည်အဘယ်အရာကိုများနယ်နိမိတ်ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်မယ့်ဒေသယူထားသောEblen နှင့် Graybiel, 1996).
အဆိုပါ ventral striatum ကွဲပြားခြားနား, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်မှုနှင့်မော်တာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ကို ထောက်. , သုတေသီများ ventral striatum အာရုံခံ၏ function ကွဲပြား ensembles ၏ရေးစပ်ကြောင်းအဆိုပြုထားကြပါပြီ (Pennartz et al ။ , 1994) ။ တစ်ဦး ensemble အလားတူ afferent / efferent ဆက်ဆံရေးအဖြစ်နီးကပ်စွာ related ပေးခြင်းအပြုအမူအတွက် functions များ, neuroendocrine စည်းမျဉ်းများနှင့် sensorimotor ကံကြမ္မာ (ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအာရုံခံ၏အုပ်စုတစုအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်Pennartz et al ။ , 1994) ။ Pennartz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များက "အဆိုတင်သွင်းနျူကလီးယပ် accumbens ၎င်း၏တခုလုံးကို, ထို့နောက်အချို့အပြုအမူ parameter သည်တစ်ဦး unidirectional ပြောင်းလဲမှု effectuate လိုသည်၎င်း၏ပစ်မှတ်အဆောက်အဦများ, တစ် monolithic output ကိုမပို့ပါဘူး။ "မယ့်အစား" တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြား ensemble ဖြစ်လျှင်ဤ ensemble များအတွက်ဝိသေသပစ်မှတ်အဆောက်အဦများ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားပြောင်းရွှေ့သည်, ဤအရပ်မှ ( "အထူးသညျဤမီးရှို့ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအမူအကျင့်သက်ရောက်မှုသွေးဆောင်ရသော output ကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းPennartz et al ။ , 1994, စစ။ 726) ။
အဆိုပါ ventral striatum ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏သက်သေအထောက်အထားများ psychopharmacological သုတေသနကနေလာပါတယ်။ အဆိုပါဂါဘမြို့သားများဥပမာအားဖြင့်, microinjectionA အဆိုပါ caudal shell ကိုအတွက် microinjection အစား၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောအမူအကျင့် elicits သော်လည်း accumbens ကြွက်များတွင် Shell အဆိုပါ rostral medial အတွက် agonist muscimol, အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူ elicits ။ အလယ်အလတ် shell ကို GABAergic activation (စုစုပေါင်းအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်Reynolds ကနှင့် Berridge, 2002). ဤရွေ့ကားရလဒ်များနျူကလိယ accumbens ၏ဒေသခံ microcircuits အတွက် GABAergic neurotransmission bivalently rostrocaudal gradients တလျှောက်တွင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြုအမူ mediates ကဖော်ပြသည်။ ဤသည် bivalent ဌာနခွဲအဆိုပါ ventral striatum အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိစိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပုံကို elucidate စေရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, TRKB တစ် tyrosine kinase အဲဒီ receptor, အကျိုးသက်ရောက်မှုဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေ differentially တွေ့ရှိထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်များတွင် D1-type အမျိုးအစားအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ optogenetic ဆွအပြုအမူအေးခဲနေသောထဲမှာ D2-type အမျိုးအစားအလတ်စား spiny အာရုံခံရလဒ်များစိတ်ကြွဆေးသော်လည်း, ဆုလာဘ်မောင်းနှင်အပြုအမူတွေကိုပိုကောင်းစေပါတယ် (Lobo et al ။ , 2010).
သို့သော်ဆဲလ်အမျိုးအစားများအတွက်ခြားနားချက်အမူအကျင့်ရလဒ်များတွင်တွေ့မြင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောများအတွက်တစ်ခုတည်းသောရှင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ဒေသများ၏တိကျသောဆဲလ်အမျိုးအစားများအတွင်းရှိမော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုများသည်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်သည့်နည်းလမ်းများကိုပုံဖော်သည်။Russo နှင့် Nestler, 2013) ။ ထို့ကြောင့် VTA-နျူကလိယအတွက်သူတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ပုံသဏ္ဍာန်မော်လီကျူးယန္တရားများအတွက်ဖိအား circuit ကို accumbens နှင့်လှုံ့ဆော်မှု adapter သို့မဟုတ် maladaptively ကြုံတွေ့နေကြသည်ရှိမရှိ impact နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, သို့မဟုတ်အခြား psychopathologies များအတွက်အားနည်းချက်အောက်ပါဖိအားဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဆဲလ်အတွင်းရှိမော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ (ကြည့်ရှု Russo နှင့် Nestler, 2013) ။ သုတေသီများဖိအားကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်သော NAc အတွက်မျိုးဗီဇ loci map မှမျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့် assay အသုံးချရန်အဘို့အထို့ကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောသုတေသနနျူကလိယ accumbens များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမီးမောင်းထိုးပြသော်လည်း, လူ့သုတေသနဤမော်ဒယ်များဘာသာပြန်ဆိုပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ fMRI နည်းစနစ်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက် function ကိုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆန်းစစ်ဘို့အရှိဆုံးအသုံးများနည်းလမ်း, လူ့ striatum အတွက်တိကျသောနယ်နိမိတ်နှင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏တိကျသောကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ထို့အပြင် BOLD signal ကို neurochemistry အကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်သတင်းအချက်အလက်ပေးမထားဘူး, ထိုသို့ BOLD activation (striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်ဆက်စပ်ပုံကိုမရှင်းလင်းဖြစ်နေဆဲSchott et al ။ , 2008) ။ တချို့ကသုတေသီများ dopamine လွှတ်ရာကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ပေနှင့်အတူ fMRI, ပေါင်းစပ်ပါပြီ။ အရေးကြီးတာက, မြင့်သောဆုလာဘ်-related dopamine လွှတ်ပေးရန် fMRI (နှင့်အတူတိုင်းတာ dopaminergic neurotransmission ventral striatum activation အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးက, ventral striatum အတွက်တိုးချဲ့ဖွင့်သုံးဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Schott et al ။ , 2008) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများဆုံး neuroimaging သုတေသနလုပ်ကြောင်းကြီးမားသောတင်ပါသည်စေ့ကိုအသုံးပြုသည် ယင်း၏အပိုဒ်ခွဲသို့ ventral striatum subdivide နီးပါးမဖြစ်နိုင်က။ အဆိုပါ activation နျူကလီးယပ် accumbens ဒါမှမဟုတ် caudate နျူကလိယ၏ ventral ဦးခေါင်း (ခုနှစ်တွင်ဗဟိုမှ အကယ်. ထိုသို့မကြာခဏရှင်းလင်းDelgado, 2007), ဒါမှမဟုတ် striatum ပင်ထပ်မံ subdivisions ။ အထူးသဖြင့် ventral striatum နှင့် VTA (တူသောဒေသများအတွက် BOLD signal ကို၏ Spatial resolution ကိုတိုးတက်လာဖို့ကြိုးစားမှု, နေသော်လည်းD'Ardenne et al ။ , 2008), ကျနော်တို့ (လှုပ်ရှားမှုမှီခို-dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်အစီအမံလိုအပ်Schott et al ။ , 2008) ။ အနာဂတ်သုတေသနနှင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သိပ္ပံနည်းစနစ်များဟာ ventral striatum ၏ရန် function ကွဲပြားဒေသများသက်ဆိုင်ရာပိုပြီးချော-စပါးကို subdivisions ထုတ်ဖေါ်စေခြင်းငှါလိုအပ်နေပါသည်။
9 ။ အနာဂတ်လမ်းညွန်
သုတေသနမြီးကောင်ပေါက် '' ဘဝအသက်တာ၌ဆုလာဘ်၏ရှုပ်ထွေးသောအခန်းကဏ္ဍ disentangle မှစတင်နေပြီနေစဉ်, အတော်ကြာပံ့ပိုးမှုများကိုသိသိသာသာရှေ့သို့လယ်ပြင်ရွှေ့နှင့်အကြီးမားဆုံးသောကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်တံ့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများအကြောင်းကို testable ယူဆချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တင်. ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနထို့ကြောင့်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအခင်းအကျင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးရလဒ်များ၏ neurobiology သြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လောက်ကွာခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သငျ့သညျ။ အချိန်ဆုလာဘ်အဖြစ် psychopathology အတွက်မတ်စောက်သောတိုးဆီသို့တစ်ခုတိုးလာ orientation ကိုအခြေခံကြောင်းလူမှုရေးအပြုအမူအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုနှင့်အတူ coupled, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် input ကိုမှလျင်မြန်စွာဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်မြင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ညွှန်ပြသက်သေအထောက်အထားများအလငျး၌ဤရည်မှန်းချက်များဖြေရှင်းရန်မှည့်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသန ventral striatum sensitivity ကို maladaptive နှိုင်းယှဉ်သပ္ပါယ်ဖြစ်သောအတွက်အခင်းအကျင်း disentangle ဆက်လက်လိုအပ်နေပါသည်။ ထို့အပွငျမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် ventral striatum reactivity ကို၏အလားအလာသပ္ပါယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြအလုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်အခြေတည်ကြောင်းပေးထားဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုအတွက်တွေ့ရှိချက် replicates ကြောင်းသုတေသနလိုအပ်ပေသည်။ ငါအနာဂတ်သုတေသနအတွက်စုံစမ်းရေးအခြားဒေသများဖျောပွအောက်တွင်။
9.1 ။ မတူကွဲပြားသောအခင်းအကျင်းကိုအသာပုတ်ကြောင်းဝတ္ထုနှင့်ဆန်းသစ်သောတာဝန်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်အခြေအနေများဖြတ်ပြီးဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ခွင့်ပြု
လေ့လာမှုများတဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွင်အောင်ဆယ်ကျော်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆန်းစစ်ထွန်းသစ်စနေကြတယ်ပေမယ့်မတိုင်မီကသုတေသနအဓိကအား, (ဥပမာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဆန်းစစ်နှင့်လူမှုရေးလေဟာနယ်အတွင်း sensitivity ကိုဆုချထားပါတယ် Peak et al ။ , 2013, Braams et al ။ , 2014 နှင့် ချိန် et al ။ , 2010) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသောလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအားဖြင့်မှတ်သားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရဆုံးမကြာခဏ (socioemotional arousal ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပေးထားDahl, 2008 နှင့် Gardner နှင့် Steinberg, 2005), သုတေသနဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများ၏ရှုပ်ထွေးကိုအသာပုတ်နိုင်ရန်အတွက်စမ်းသပ်တာဝန်များကိုသို့လူမှုရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်နေပါသည်။ သုတေသီများကြောင်းကိုထိပုတ်ပါတာဝန်များကိုအကြီးအကျယ်အနုတ်လက္ခဏာအပြုအမူတွေ (ဥပမာစွန့်စားမှုဆည်းပူးနေ) အပေါ်မှီခိုသို့မဟုတ်လူမှုရေးဖြစ်စဉ်များ၏မရှိခြင်းအတွက် sensitivity ကိုဆုချဖို့ဆက်လက်လြှငျ, ventral striatum sensitivity ကိုနေရာအနှံ့အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်ဆဲလုပ်ငန်းများကို (antisocial ဆုံးဖြတ်ချက်များနှိုင်းယှဉ် prosocial တခြားသူတွေရဲ့ဥပမာရှိနေခြင်း,) ပိုမိုရှုပ်ထွေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များထည့်သွင်းလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ventral striatum sensitivity ကိုတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးတာဝန်ယူမှုကိုကိုယ်စားပြုသော, ထူးခြားတဲ့ပုံစံများကိုပြသဖွယ်ရှိပေမယ့်သပ္ပါယ်ဖြစ်ခြင်းသည်အခြားအချိန်များတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရှုပ်ထွေးနက်နဲအပြည့်အဝဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေအတွက် ventral striatum reactivity ကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အပြုအမူကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုသို့ထည့်သွင်းစေခြင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
9.2 ။ စွန့်စားမှုအများဆုံးလူငယ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
အားလုံးကတော့ striatal activation ကောင်းမကောင်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဆက်စပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဆုလာဘ်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအစေခံတော်မူသောအဘို့လူငယ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကိုကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ထုတ်ခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့သင့်လျော်သော sociocultural အခင်းအကျင်းအတွင်းအဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးသောအပြုအမူဆီသို့မြီးကောင်ပေါက်ကိုညွှန်ကြားဖို့ပိုကောင်းချုပ်အစီအစဉ်များနိုင်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်အချို့အပြုအမူတွေကိုတန်ဖိုးထားသောအုပ်စုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များအပေါ်ယူပါလိမ့်မယ်။ သူတို့မိသားစုများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယဇျပူဇျောနှငျ့ပတျသကျတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန် (ခုနှစ်တွင်စေ့စပ်အဖြစ်ဥပမာ, ကြှနျုပျတို့မကြာသေးမီကအဖြူရောင်နှင့်လက်တင်လူငယ်တို့တွင် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ် activation လေ့လာTelzer et al ။ , 2010). သူတို့ရဲ့မိသားစုမှပံ့ပိုးသည့်အခါလက်တင်သင်တန်းသားများကိုပိုပြီး ventral striatum activation ပြသသွားရမည်ကိုမိမိတို့အဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆုလာဘ်ရရှိမှုအခါ, White ကသင်တန်းသားများကိုပိုပြီး ventral striatum activation ပြသခဲ့သည်။ ဤရလဒ်များကလူတစ် ဦး ၏မိသားစုကိုကူညီရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်၎င်းအကူအညီများမှရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးကျေးဇူးများအားဖြင့်လမ်းပြနိုင်ပြီးထိုဆုလာဘ်ကိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများမှပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်တိကျသောယဉ်ကျေးမှုအုပ်စုတစ်ခု၏တွေ့ရှိချက်များအပေါ်တွင်မှီခိုပါကကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းသည်အခြားအုပ်စုနှင့်မအောင်မြင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောမြီးကောင်ပေါက်များကသာတန်ဖိုးထားသည့်အပြုအမူများပါ ၀ င်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသနသည် dopamine ဆုလာဘ်များကမတူကွဲပြားသောဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုများမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုဂရုတစိုက်ဖြည့်တင်းသင့်သည်။
9.3 ။ စစ်မှန်သောဘဝကျန်းမာရေးရလဒ်များနှင့်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်းဖို့အာရုံကြော sensitivity ကိုသုံးပါ
သုတေသနအနာဂတ်ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးခန့်မှန်း variable ကိုအတိုင်းဦးနှောက်ဆက်ဆံဖို့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မြီးကောင်ပေါက် '' အာရုံကြော sensitivity ကိုမှန်ကန်-ဘဝကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခန့်မှန်းဘယ်လိုဆန်းစစ်ဖို့မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ Self-အစီရင်ခံရည်ရွယ်ချက်အနာဂတ်ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်တချို့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း, သက်သေအထောက်အထား (Self-အစီရင်ခံစာများအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏ multidimensional သဘောသဘာဝကိုဖမ်းယူဖို့လုံလောက်သောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုAklin et al ။ , 2005) ။ သူတို့ Self-အစီရင်ခံစာများ (ထဲမှာ untruthful ဖြစ်နိုင်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတိကျမှုအစီရင်ခံစာကိုများကိုသိမြင်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့သို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤAklin et al ။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စဉ်များထိုကဲ့သို့သောသဘောထားများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ် Self-အစီရင်ခံအတိုင်းအတာအားဖြင့်ကရှင်းပြသည်မဟုတ်ကြောင်းအပြုအမူပြောင်းလဲမှုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရှင်းပြပေမည်။ neuroimaging တွင်လတ်တလောတိုးတက်မှုတွေဖြစ်စေတစ်ပြိုင်နက်တည်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင်အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အာရုံကြော activation သုံးစွဲဖို့စတင်ပါပြီ။ အရေးကြီးတာက, ဒီအလုပ်, ဥပမာ (အာရုံကြော activation အပြုအမူတွေနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေယူပြီးအန္တရာယ်အတွက် (တိုးသို့မဟုတ်လျှောက်လျော့နည်း) နောက်ပိုင်းတွင်တချက်မှတစ်နှစ်တစ်လလေ့လာတွေ့ရှိလိမ့်မည်ပြောင်းလဲမှုများဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မတွေ့ရှိရထားပါတယ် Cascio et al ။ , 2014, Telzer et al ။ , 2013 နှင့် Telzer et al ။ , 2014) ။ Prospect မြီးကောင်ပေါက် '' အာရုံကြော sensitivity ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေအတွက်အနာဂတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းသီးခြားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသန၏အဓိကရည်မှန်းချက်ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီး striatum reactivity ကို (ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောနှင့် maladaptive အခင်းအကျင်းအတွက် sensitivity ကိုဆုချ) ကနျြးမာရေး-related အပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်းဘယ်လို ventral ဆနျးစစျဖို့ဖြစ်သင့်တယ်။
10 ။ နိဂုံး
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်, ငါ ventral striatum sensitivity ကိုအတွက်ထိပ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်သပ္ပါယ်ဖြစ်နိုင်ပြီးတိုးတက်သုခချမ်းသာနှင့်ကျန်းမာရေး-မြှင့်တင်အပြုအမူတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်မပြသခဲ့ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုဒီယန္တရား dopaminergic ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအကြီးအကျယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကျန်းမာရေး-အလျှော့အပြုအမူတွေကိုမှဦးဆောင်သောအစဉ်အလာအမြင်စိန်ခေါ်။ ထို့ကြောင့်ဤရောဂါလက္ခဏာများပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်တဲ့အခါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအချိန်ကာလအတွင်းအပြုအမူတွေကိုယူပြီးစိတ်ကျရောဂါနှင့်အန္တရာယ်နှစ်ဦးစလုံး၏အထက်သို့ဘယ်နေရာတွေမှာလဲလျော့ချဖို့ရာကအလားအလာ neurobiological ယန္တရားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ Modify ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြားရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်း၏ဦးဆောင်အကြောင်းမရှိဖြစ်ကြသည်။ တိုက်ရိုက်မြီးကောင်ပေါက် '' မြင့် ventral striatal sensitivity ကိုကွာပြဿနာအပြုအမူတွေကနေနှင့်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့, prosocial အပြုအမူတွေဆီသို့ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေနှင့်ကျန်းမာရေးရလဒ်များ၏အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးဧရာသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်သောအချက်များကိုနားလည်ခြင်း။
Aklin et al ။ , 2005
WM Aklin, CW Lejuez, MJ Zvolensky, CW Kahler, အမ် Gwadz
innercity မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူ propensity ယူပြီးအန္တရာယ်၏အမူအကျင့်အစီအမံ၏အကဲဖြတ်
ပြုမူနေ။ res ။ Ther ။ , 43 (2005), စစ။ 215-228
PDF ဖိုင် (226 K)
အလက်ဇန်းဒါး et al ။ , 1986
GE အလက်ဇန်းဒါး, MR De Long က, et al ။
Basal ganglia နှင့် cortex ချိတ်ဆက် function အသားအရောင်ခွဲခြားဆားကစ်၏စင်ပြိုင်အဖွဲ့အစည်းက
Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ ,9(1986), စစ။ 357-381
Andersen က et al ။ , 1997
SL Andersen က, အမ် Rutstein, JM Benzo, JC Hostetter, MH Teicher
dopamine အဲဒီ receptor overproduction နှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု
Neuroreport, 8 (1997), စစ။ 1495-1498
Badanich et al ။ , 2006
Ka Badanich, KJ Adler, et al ။
မြီးကောင်ပေါက်နျူကလီးယပ်အတွက်ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကိုနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine အတွက်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြား septi accumbens
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ , 550 (2006), စစ။ 95-106
PDF ဖိုင် (666 K)
ဘား-Haim et al ။ , 2009
Y. ဘား-Haim, NA Fox က, ခ Benson, AE Guyer, အေ Williams က, EE နယ်လ်ဆင်, အမ် Ernst
Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 20 (8) (2009), စစ။ 1009-1018
ဂိ et al ။ , 2000
FM ရေဂိ, JB- တေလာ, et al ။
convergence နှင့် postnatal ကာလအတွင်း medial prefrontal cortex အတွက် monoaminergic စနစ်များ plasticity: psychopathology ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်
Cereb ။ cortex, 10 (10) (2000), စစ။ 1014-1027
Braams et al ။ , 2014
BR Braams, အက်စ်ပီတာ, JS Peper, ခGüroğlu, EA ၏ Crone
ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်လူမှုရေးဦးနှောက်ဒေသ differential ကိုပံ့ပိုးမှုများကို: ကိုယ့်ကိုယ်ကို, သူငယ်ချင်းနှင့်ရန်အဘို့အလောင်းကစား
Neuroimage, 100 (2014), စစ။ 281-289
PDF ဖိုင် (901 K)
Brenhouse et al ။ , 2008
HC Brenhouse, KC Sonntag, et al ။
prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ်ယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှကြားဆက်ဆံရေး
ဂျေ neuroscience ။ , 28 (10) (2008), စစ။ 2375-2382
Bjork et al ။ , 2004
JM Bjork, ခ Knutson, GW Fong သည်, DM Caggiano, SM Bennett က, DW Hommer
ဂျေ neuroscience ။ , 24 (8) (2004), စစ။ 1793-1802
Bjork et al ။ , 2010
JM Bjork, AR Smith က G. အ Chen က DW Hommer
မြီးကောင်ပေါက်, လူကြီးများနှင့်ဆုလာဘ်: fMRI သုံးပြီးစိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry စုဆောင်းမှုနှိုင်းယှဉ်
PLoS ONE,5(7) (2010), p ။ e11440
Cardinal et al ။ , 2002
RN Cardinal ဂျေအေပါကင်, ဂျေခန်းမ, BJ Everitt
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အပု amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 26 (3) (2002), စစ။ 321-352
PDF ဖိုင် (431 K)
ကာဇီ et al ။ , 2008
BJ Casey, RM ဂျုံးစ်က TA Hare
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1124 (1) (2008), စစ။ 111-126
Cascio et al ။ , 2014
CN Cascio, ဂျေငါးကြင်း, ကို MB O'Donnell, FJ Tinney ဂျူနီယာ, CR Bingham, JT Shope, eb Falk
လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု Buffering: တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အာရုံကြောဆက်စပ်တဲ့သက်တူရွယ်တူများ၏ရှေ့မှောက်၌ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကားမောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း
ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ , 27 (2014), စစ။ 83-95
Cauffman et al ။ , 2010
အီး Cauffman, EP Shulman, အယ်လ် Steinberg, အီး Claus, MT Banich, အက်စ်ဂရေဟမ်, ဂျေ Woolard
အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ကိုထိခိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှု
dev ။ Psychol ။ , 46 (1) (2010), p ။ 193
အမျိုးသားအရေးပါသောစာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာများ, vol ။ ကနေရရှိနိုင်တဲ့ 64 (2) ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ, Hyattsville, MD (2014): http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/2014/021.pdf
: မှာ (2013) ရရှိနိုင် www.cdc.gov/yrbs
ကုန်သည်များ et al ။ , 2014
RA ကုန်သည်များ, JR တေလာ, MN Potenza
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 160 (2014), စစ။ 1041-1052
ချိန် et al ။ , 2010
ဂျေချိန်, ဃအဲလ်ဘတ်, အယ်လ် O 'Brien, K. Uckert, အယ်လ် Steinberg
သက်တူရွယ်တူများသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ပိုမိုများပြားစေသည်
dev ။ သိပ္ပံ။ , 14 (2) (2010), စစ။ F1-F10
Crone နှင့် Dahl, 2012
EA ၏ Crone, RE Dahl
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ , 13 (9) (2012), စစ။ 636-650
D'Ardenne et al ။ , 2008
K. က D'Ardenne, SM လူယာ, LE Nystrom, JD Cohen ကို
လူ့ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic အချက်ပြမှုများကိုထင်ဟပ် BOLD တုံ့ပြန်မှု
သိပ္ပံ, 319 (5867) (2008), စစ။ 1264-1267
ဆယ်ကျော်သက်မောင်းနှင်မှုအန္တရာယ်များမှသက်ဆိုင်ရာ, ဇီဝဗေဒဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့် neurobehavioral အချက်များ
နံနက်။ ဂျေ Prev ။ Med ။ , 35 (3) (2008), စစ။ S278-S284
PDF ဖိုင် (96 K)
လူ့ striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှု
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1104 (1) (2007), စစ။ 70-88
di Martino et al ။ , 2008
A. အ Di Martino, အေ Scheres, et al ။
လူ့ striatum ၏ functional ဆက်သွယ်မှု: တစ်အနားယူပြည်နယ် fMRI လေ့လာမှု
Cereb ။ cortex, 18 (12) (2008), စစ။ 2735-2747
ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2003
LA ကဒေါက်ဂလပ်, EI Varlinskaya, LP သို့လှံ
Physiol ။ ပြုမူနေ။ , 80 (2) (2003), စစ။ 317-325
PDF ဖိုင် (389 K)
ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2004
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်လူမှုရေး interaction က၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဂုဏ်သတ္တိများ: ဘာသာရပ်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အိုင်ဆိုလိတ်အိုးအိမ်သာရှိပြီးပြည်ပမှလူမှုရေး၏သက်ရောက်မှု
dev ။ Psychobiol ။ , 45 (3) (2004), စစ။ 153-162
Eblen နှင့် Graybiel, 1996
အက်ဖ် Eblen, Am Graybiel
ယင်းဟာ Macaque မျောက်အတွက် striosomes မှ prefrontal cortical သွင်းအားစု၏မြင့်မားကန့်သတ်ဇာစ်မြစ်
ဂျေ neuroscience ။ , 15 (1996), စစ။ 5999-6013
Ernst et al ။ , 2005
အမ် Ernst, EE နယ်လ်ဆင်, အက်စ် Jazbec, eb လူယာ, CS ရဟန်းတော်, အီး Leibenluft, DS ထင်းရူး
လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens
Neuroimage, 25 (4) (2005), စစ။ 1279-1291
Friemel et al ။ , 2010
CM Friemel, R. Spanagel, အမ် Schneider
ကြွက်များတွင် pubertal ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစဉ်အတွင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာဆုလာဘ်ထိပ်များအတွက် sensitivity ကိုဆုချ
တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ ,4(2010), စစ။ 1-10
အဆိုပါကလေးဘဝ၏ Neurobiology, Springer ဘာလင် Heidelberg (2014), စစ။ 167-188
သွပ်ရည်စိမ်နှင့် McGlennen, 2013
အေသွပ်ရည်စိမ်, K. McGlennen
အရွယ်ရောက်နှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆန္ဒရှိအားဖြည့်ဖို့ Enhanced striatal sensitivity ကို
ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ , 25 (2013), စစ။ 284-296
သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006
အေသွပ်ရည်စိမ်, TA Hare, အီး Parra, ဂျေ Penn, အိပ်ချ် Voss, G. အဂလိုဗာ, BJ Casey
orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်
ဂျေ neuroscience ။ , 26 (25) (2006), စစ။ 6885-6892
သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007
အေသွပ်ရည်စိမ်, T. Hare, အိပ်ချ် Voss, G. အဂလိုဗာ, BJ Casey
dev ။ သိပ္ပံ။ , 10 (2) (2007), စစ။ F8-F14
Gardner နှင့် Steinberg, 2005
အမ် Gardner, အယ်လ် Steinberg
စမ်းသပ်လေ့လာမှု: အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စွန့်စားမှု preference ကိုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အောင်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် peer သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
dev ။ Psychol ။ , 41 (4) (2005), p ။ 625
Geier နှင့် Luna, 2009
C. Geier, ခ Luna
Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ , 93 (3) (2009), စစ။ 212-221
PDF ဖိုင် (381 K)
Geier နှင့် Luna, 2012
CF Geier, ခ Luna
ကလေးသူငယ် Dev မှ။ , 83 (4) (2012), စစ။ 1262-1274
Geier et al ။ , 2010
CF Geier, R. Terwilliger, T. Teslovich, K. Velanova, ခ Luna
ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်နု
Cereb ။ cortex, 20 (7) (2010), စစ။ 1613-1629
မီးခိုးရောင် et al ။ , 2002
အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏ပေါင်းစည်းမှု
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 99 (2002), စစ။ 4115-4120
အဆိုပါ Basal ganglia နှင့်မော်တာထိန်းချုပ်
အာရုံကြော Plast ။ , 10 (2003), စစ။ 107-120
Guyer et al ။ , 2009
AE Guyer, eb လူယာ Tone, ND Shiffrin, DS ထင်းရူး, EE နယ်လ်ဆင်
ကလေးသူငယ် Dev မှ။ , 80 (4) (2009), စစ။ 1000-1015
Guyer et al ။ , 2006
AE Guyer, EE နယ်လ်ဆင်, K. Perez-Edgar, MG Hardin, R. Roberson-နေအောင်, CS ရဟန်းတော်, JM Bjork, HA Henderson, DS ထင်းရူး, NA Fox က, အမ် Ernst
အစောပိုင်းကလေးဘဝအပြုအမူတားစီးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမြီးကောင်ပေါက်အတွက် Striatal အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲတချို့
ဂျေ neuroscience ။ , 26 (2006), စစ။ 6399-6405
Haber နှင့် Knutson, 2010
SN Haber, ခ Knutson
Neuropsychopharmacology, 35 (1) (2010), စစ။ 4-26
Harbaugh et al ။ , 2007
သိပ္ပံ, 316 (5831) (2007), စစ။ 1622-1625
ယုန် et al ။ , 2008
TA Hare, N. စပါး, အေသွပ်ရည်စိမ်, Hu Voss, GH ဂလိုဗာ, BJ Casey
တစ်ဦးစိတ်ပိုင်း Go ကို-Nogo တာဝန်စဉ်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုများနှင့်စည်းမျဉ်း၏ဇီဝအလွှာ
Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 63 (10) (2008), စစ။ 927-934
PDF ဖိုင် (348 K)
Haycock et al ။ , 2003
JW Haycock, L. Becker က, အယ်လ်အန်း, Y. Furukawa, O. Hornykiewicz, SJ ကိရှ
လူ့ striatum အတွက် dopamine အတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများနှင့်အခြား presynaptic dopaminergic အမှတ်အသားများအကြားမှတ်သားမညီမျှမှု
ဂျေ Neurochem ။ , 87 (3) (2003), စစ။ 574-585
Holt et al ။ , 1997
DJ သမား Holt, Am Graybiel, သမဝါယမ Saper
လူ့ striatum ၏ Neurochemical ဗိသုကာ
ဂျေ comp ။ Neurol ။ , 384 (1) (1997), စစ။ 1-25
Jager et al ။ , 2013
G. အ Jager, RI က Block ကို, အမ် Luijten, အဲန်အက်ဖ်ရမ်းဆေး
ဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်-သုံးပြီးယောက်ျားလေးများအတွက် striatal hyperactivity အဘို့အစမ်းသဘောသက်သေအထောက်အထား: cross-section ပေါင်းစုံပါ fMRI လေ့လာမှု
ဂျေ Psychoact ။ မူးယစ်ဆေးဝါး, 45 (2) (2013), စစ။ 156-167
Jensen et al ။ , 2003
ဂျေ Jensen, AR McIntosh, AP Crawley, DJ သမား Mikulis, G. အ Remington, အက်စ် Kapur
ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများ၏မျှော်လင့်အတွက် ventral striatum ၏တိုက်ရိုက် activation
အာရုံခံဆဲလျ, 40 (6) (2003), စစ။ 1251-1257
PDF ဖိုင် (173 K)
ပြေးရတာ et al ။ , 1999
က MS ပြေးရတာ, Y. Kubota, CI Connolly, V. Hillegaart, Am Graybiel
သိပ္ပံ, 286 (1999), စစ။ 1745-1749
Kalenscher et al ။ , 2010
T. Kalenscher, CS Lansink, ဖက်စပ် Lankelma, CM Pennartz
ventral striatum အတွက်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ် gamma လှိုဒေသတွင်းမတူညီနှင့်ဒေသခံပစ်ခတ်ရန်လှုပ်ရှားမှု modulate နေကြတယ်
ဂျေ Neurophysiol ။ , 103 (3) (2010), စစ။ 1658-1672
Koya et al ။ , 2009
အီး Koya, SA ရွှေ, ကယ် Harvey, DH Guez-ဘာဘာ, အေ Berkow, DE Simmons, BT မျှော်လင့်ချက်
ကိုကင်း-activated နျူကလိယ၏ပစ်မှတ်ထားပြတ်တောက်အာရုံခံအခြေအနေတွင်-တိကျတဲ့ာင်းကာကွယ်ပေးသည် accumbens
နတ်။ neuroscience ။ , 12 (8) (2009), စစ။ 1069-1073
သိုးသငယ်ကို et al ။ , 2000
ek သိုးသငယ်ကို, LS Krimer, PS Goldman-Rakic
မျောက်တွေကို၏ prefrontal cortex အတွက်ဖော်ထုတ်အာရုံခံမှ catecholamines နှင့် serotonin သွင်းအားစုများ differential postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ဂျေ neuroscience ။ , 20 (23) (2000), စစ။ 8780-8787
Lan et al ။ , 2011
X တို့မှာ Lan, CH Legare, CC ကို Ponitz, အက်စ်လီ, FJ Morrison
အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုများနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၏ subcomponents အကြားလင့်များစုံစမ်းစစ်ဆေး: တရုတ်နှင့်အမေရိကန်မူကြိုကျောင်းသားများတစ်ဦး Cross-ယဉ်ကျေးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဂျေ Exp ။ ကလေးသူငယ် Psychol ။ , 108 (3) (2011), စစ။ 677-692
PDF ဖိုင် (412 K)
Lejuez et al ။ , 2002
CW Lejuez, JP ဖတ်, CW Kahler, JB- Richards, အရှေ့တောင်ရမ်းဆေး, GL Stuart, RA ဘရောင်း
အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတဲ့အမူအကျင့်အတိုင်းအရှည်၏အကဲဖြတ်: အလေဘောလုံး Analogue အန္တရာယ် Task ကို (BART)
ဂျေ Exp ။ Psychol ။ Apple က။ , 8 (2) (2002), p ။ 75
Lobo et al ။ , 2010
MK Lobo, HE Covington, ဃ Chaudhury, AK Friedman, အိပ်ချ် Sun က, ဃ Damez-Werno, EJ Nestler
ကိုကင်းဆုလာဘ်၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့တူတဲ့အချက်ပြ BDNF ဆုံးရှုံး optogenetic ထိန်းချုပ်မှု
သိပ္ပံ, 330 (2010), စစ။ 385-390
Masten et al ။ , 2009
CL Masten, ni Eisenberger, LA က Borofsky, JH Pfeifer, K. McNealy, JC Mazziotta, အမ် Dapretto
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ ,4(2) (2009), စစ။ 143-157
Matthews က et al ။ , 2013
အမ် Matthews, C. Bondi, G. အတောရက်စ်, ခ Moghaddam
ဆယ်ကျော်သက် dorsal striatum အတွက်လျှော့ချ presynaptic dopamine လှုပ်ရှားမှု
Neuropsychopharmacology, 38 (7) (2013), စစ။ 1344-1351
McRae et al ။ , 2012
K. McRae, JJ စုစုပေါင်း, ဂျေ Weber, ER Robertson က P. Sokol-Hessner, RD Ray, KN Ochsner
ကလေးများအတွက်သိမြင်မှု reappraisal တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု, ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူကြီးများ: စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ ,7(1) (2012), စစ။ 11-22
Meredith et al ။ , 1993
GE က Meredith, CMA Pennartz, HJ Groenewegen
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ဓာတုအချက်ပြများအတွက်ဆယ်လူလာမူဘောင်
prog ။ ဦးနှောက် Res ။ , 99 (1993), စစ။ 3-24
PDF ဖိုင် (2204 K)
Moll et al ။ , 2006
ဂျေ Moll, အက်ဖ် Krueger, R. Zahn, အမ် Pardini, R. de Oliveira-Souza, ဂျေ Grafman
ကုသိုလ်ဖြစ်လှူဒါန်းမှုနှင့် ပတ်သက်. လူ့နံရံပစ်ကစားနည်း-mesolimbic ကွန်ရက်များလမ်းညွှန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 103 (42) (2006), စစ။ 15623-15628
နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005
EE နယ်လ်ဆင်, အီး Leibenluft, အီးလူယာ, DS ထင်းရူး
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို: လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် psychopathology ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်
Psychol ။ Med ။ , 35 (02) (2005), စစ။ 163-174
လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုဆုချ: neuroimaging ကနေထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ , 14 (6) (2004), စစ။ 769-776
PDF ဖိုင် (242 K)
Padmanabhan နှင့် Luna, 2014
A. အ Padmanabhan, ခ Luna
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇ: ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူမှ dopamine function ကိုဆက်သွယ်ထားသော
ဦးနှောက် Cogn ။ , 89 (2014), စစ။ 27-38
PDF ဖိုင် (499 K)
Padmanabhan et al ။ , 2011
A. အ Padmanabhan, CF Geier, SJ Ordaz, T. Teslovich, ခ Luna
inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံဦးနှောက် function ကိုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 1 (4) (2011), စစ။ 517-529
Peak et al ။ , 2013
SJ Peak, တီဂျေ Dishion, EA ၏ Stormshak, WE Moore က, JH Pfeifer
Neuroimage, 82 (2013), စစ။ 23-34
PDF ဖိုင် (727 K)
Pennartz et al ။ , 2011
CMA Pennartz, R. Ito က PFMJ Verschure, လက်ဗွေ Battaglia, TW Robbins
သင်ယူမှု, ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် hippocampal-striatal ဝင်ရိုး
ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ , 34 (10) (2011), စစ။ 548-559
PDF ဖိုင် (1756 K)
Pennartz et al ။ , 1994
, အမူအကျင့် electrophysiological နှင့်ခန္ဓာဗေဒအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးပေါင်းစည်းမှု: function ကွဲပြားအာရုံခံ ensembles တစ်ရှုပ်ထွေးအဖြစ်နျူကလိယ accumbens
prog ။ Neurobiol ။ , 42 (6) (1994), စစ။ 719-761
PDF ဖိုင် (5689 K)
Pfeifer နှင့် Allen က, 2012
JH Pfeifer, NB Allen က
အဖမ်းခံရဖှံ့ဖွိုးတိုး? မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်မမှန်အတွက်ဦးနှောက် function ကို၏ Dual-စနစ်များမော်ဒယ်များပြန်လည်
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ , 16 (6) (2012), စစ။ 322-329
PDF ဖိုင် (635 K)
Pfeifer et al ။ , 2011
JH Pfeifer, CL Masten, WE Moore က, TM အလိုအလျောက် Oswald သည် JC Mazziotta, အမ် Iacoboni, အမ် Dapretto
ဝင်ရောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်: သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှခုခံ, အန္တရာယ်များအပြုအမူများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု reactivity ကိုအတွက်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲများ
အာရုံခံဆဲလျ, 69 (5) (2011), စစ။ 1029-1036
PDF ဖိုင် (361 K)
Philpot et al ။ , 2009
RM Philpot, အယ်လ် Wecker, CL Kirstein
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထပ်ခါတစ်လဲလဲအီသနောထိတွေ့ခြင်းဟာနျူကလိယကနေ dopaminergic output ကို၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း septi accumbens ပွောငျးလဲ
int ။ ဂျေ Dev မှ။ neuroscience ။ , 27 (8) (2009), စစ။ 805-815
PDF ဖိုင် (751 K)
Poldrack et al ။ , 1999
RA Poldrack, V. Prabhakaran,, CA Seger, JD Gabrieli
တစ်သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှု၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း Striatal activation
Neuropsychology, 13 (4) (1999), p ။ 564
ဒေတာ neuroimaging ကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ Inferring: ပြောင်းပြန်အခြအနေဖြင့်အကြီးစားဒီကုဒ်ဒါမှ
အာရုံခံဆဲလျ, 72 (5) (2011), စစ။ 692-697
PDF ဖိုင် (220 K)
Pomerantz et al ။ , 2008
EM Pomerantz, FF Ng သည်, မည်သို့ဝမ်
ယဉ်ကျေးမှု, မိဘအုပ်ထိန်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အရှေ့အာရှနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဖြစ်ရပ်
Adv ။ စိတ်ရင်း။ အောင်မြင်မှု။ Soc ။ Psychol ။ ရှုထောင့်။ , 15 (2008), စစ။ 209-240
စာတိုက်နှင့် Kemper, 1993
G. အပို့စ်, အိပ်ချ် Kemper
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာဟာရစားသုံးမှုနှင့်ဇီဝရငျ့: အအမ်စတာဒမ်တိုးတက်မှုနှင့်ကျန်းမာရေး longitudinal လေ့လာမှု
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Clin ။ Nutr ။ , 47 (1993), စစ။ 400-408
Postuma နှင့် Dagher, 2006
RB Postuma, အေ Dagher
126 positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်စာပေတစ် Meta-analysis သည်အပေါ်အခြေခံပြီးဘီစီစီအမျိုးအစား ganglia functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု
Cereb ။ cortex, 16 (10) (2006), စစ။ 1508-1521
Qu et al ။ , 2015
Y. Qu, အေသွပ်ရည်စိမ်, AJ Fuligni, MD Lieberman, Eh Telzer
prefrontal cortex activation အတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအတွက်ကျဆင်းမှုအခြေခံ
ဂျေ neuroscience ။ , 35 (32) (2015), စစ။ 11308-11314
Reynolds ကနှင့် Berridge, 2002
SM Reynolds က, KC Berridge
နျူကလိယအတွက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှု shell ကို accumbens: ဂါဘမြို့သား-ရူးနှမ်းအစာစားခြင်း, အရသာ "ကဲ့သို့" / "disliking" တုံ့ပြန်မှု, နေရာ preference ကို / ရှောင်ရှားခြင်း, ကြောက်ဘို့ bivalent rostrocaudal gradients
ဂျေ neuroscience ။ , 22 (16) (2002), စစ။ 7308-7320
Romer et al ။ , 2010
ဃ Romer, AL Duckworth, အက်စ် Sznitman, အက်စ်ပန်းခြံ
မြီးကောင်ပေါက် Self-ထိန်းချုပ်မှုသင်ယူနိုင်သလား? အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေထိန်းချုပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး
prev ။ သိပ္ပံ။ , 11 (3) (2010), စစ။ 319-330
Rosenberg ကနှင့် Lewis က, 1994
DR Rosenberg က, DA Lewis က
နှောင်းပိုင်းတွင် postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းမျောက် prefrontal cortex ၏ dopaminergic innervation အတွက်အပြောင်းအလဲများ: တစ် tyrosine hydroxylase immunohistochemical လေ့လာမှု
Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 36 (4) (1994), စစ။ 272-277
PDF ဖိုင် (559 K)
Russo နှင့် Nestler, 2013
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ , 14 (9) (2013), စစ။ 609-625
Sabbagh et al ။ , 2006
MA Sabbagh, အက်ဖ် Xu, SM Carlson, LJ မောရှေ, K. Lee က
Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 17 (1) (2006), စစ။ 74-81
Satterthwaite et al ။ , 2012
TD Satterthwaite, K. Ruparel, ဂျေ Loughead, MA Elliott သည်, RT ကို Gerraty, ME Calkins, DH Wolf က
လက်ျာဘက်ဖြစ်ခြင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုလာဘ်ဖြစ်ပါသည်: လူငယ်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်တာဝန်စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုပြင်ပေးဖို့ဝန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည် related ventral striatum activation
Neuroimage, 61 (3) (2012), စစ။ 723-729
PDF ဖိုင် (473 K)
Schneider et al ။ , 2012
အက်စ် Schneider, ဂျေပီတာ, U. Bromberg, အက်စ် Brassen, SF Miedl, T. Banaschewski, IMAGEN Consortium
စွန့်စားမှုဆည်းပူးနေနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်စနစ်က: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှအလားအလာဘုံ link ကို
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 169 (2012), စစ။ 39-46
Schott et al ။ , 2008
BH Schott, အယ်လ် Minuzzi, RM Krebs, ဃ Elmenhorst, အမ် Lang, OH Winz, အေ ​​Bauer
ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း Mesolimbic အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် Active ဆုလာဘ်-related ventral striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူပတျသကျ
ဂျေ neuroscience ။ , 28 (52) (2008), စစ။ 14311-14319
ပိုး et al ။ , 2013
JS ပိုး, GJ Siegle, KH Lee က, EE နယ်လ်ဆင်, LR Stroud, RE Dahl
ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျရောဂါနှင့် pubertal ဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့ဆက်စပ်ငြင်းပယ်ခံရစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်တိုးမြှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ ,9(2013), စစ။ 1798-1807
Snyder et al ။ , 2011
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားများရွေးချယ်ခြင်း: ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်လက်ဝဲ ventrolateral prefrontal cortex အတွက် shared အာရုံကြောအလွှာစုဆောင်း
ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ , 23 (11) (2011), စစ။ 3470-3482
Somerville et al ။ , 2011
Frontostriatal ရငျ့မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာတွေကို appetitive မှသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးပျက်ကွက်ခန့်မှန်း
ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ , 23 (9) (2011), စစ။ 2123-2134
Souza et al ။ , 2009
MJ Souza, အရှေ့တောင် Donohue, SA Bung
လက်ဝဲ ventrolateral prefrontal cortex အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်ဒေသများကကမကထပြုခဲ့အရေးယူ-သက်ဆိုင်ရာအသိပညာများထိန်းချုပ်ထားသောပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ရေး
Neuroimage, 46 (1) (2009), စစ။ 299-307
PDF ဖိုင် (401 K)
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 24 (4) (2000), စစ။ 417-463
PDF ဖိုင် (414 K)
authoritative Communities, Springer, နယူးယောက် (2008), စစ။ 263-280
ဆုလာဘ်များ, ဆန္ဒရှိနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ: ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်အအနှံ့ထွန်းသစ်စ convergence နှင့်လူ့ဒေတာ
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 1 (4) (2011), စစ။ 390-403
PDF ဖိုင် (551 K)
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ ,9(2) (2005), စစ။ 69-74
PDF ဖိုင် (121 K)
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအပေါ်တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်
dev ။ ဗျာ, 28 (1) (2008), စစ။ 78-106
PDF ဖိုင် (276 K)
Steinberg et al ။ , 2009
အယ်လ် Steinberg, အက်စ်ဂရေဟမ်, အယ်လ် O 'Brien, ဂျေ Woolard, အီး Cauffman, အမ် Banich
ကလေးသူငယ် Dev မှ။ , 80 (1) (2009), စစ။ 28-44
Sturman နှင့် Moghaddam, 2012
DA Sturman, ခ Moghaddam
Striatum လူကြီးများနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားဆုလာဘ် process လုပ်တယ်
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 109 (5) (2012), စစ။ 1719-1724
Tarazi et al ။ , 1999
FI Tarazi, EC အ Tomasini, RJ Baldessarini
ကြွက် cortical နှင့် striatolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: တစ်ခု autoradiographic လေ့လာမှု
dev ။ neuroscience ။ , 21 (1999), စစ။ 43-49
Teicher et al ။ , 1995
MH Teicher, SL Andersen က, JC Hostetter ဂျူနီယာ
striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအဘို့သက်သေအထောက်အထားသော်လည်းမနျူကလိယ accumbens
dev ။ ဦးနှောက် Res ။ , 89 (1995), စစ။ 167-172
PDF ဖိုင် (582 K)
Telzer et al ။ , 2015a
Eh Telzer, AJ Fuligni, အေသွပ်ရည်စိမ်
JY Chiao, S.-C. လီ, R. Seligman, R. Turner (Eds ။ ), ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံများ၏အောက်စဖို့လက်စွဲစာအုပ်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, NY (2015)
Telzer et al ။ , 2010
အဖြူရောင်နှင့်လက်တင်လူငယ်များအကြားမိသားစုအကူအညီများ၏ဆုလာဘ်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု: ပေးခြင်းစဉ်ရရှိမှု
Soc ။ neuroscience ။ ,5(2010), စစ။ 508-518
Telzer et al ။ , 2014
Eh Telzer, AJ Fuligni, MD Lieberman, အေသွပ်ရည်စိမ်
eudaimonic နှင့် hedonic ဆုလာဘ်မှအာရုံကြော sensitivity ကို differential အချိန်ကျော်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေကြိုတင်ခန့်မှန်း
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 111 (2014), စစ။ 6600-6605
Telzer et al ။ , 2013
prosocial ဆုလာဘ်မှ Ventral striatum activation ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအတွက် longitudinal ကျဆင်းမှုခန့်မှန်း
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ ,3(2013), စစ။ 45-52
PDF ဖိုင် (351 K)
Telzer et al ။ , 2011
Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောဒေသများမိသားစုဆီသို့ဦးတည် prosocial ဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်အတွင်းစုဆောင်းနေကြသည်
Neuroimage, 58 (2011), စစ။ 242-249
PDF ဖိုင် (768 K)
Telzer et al ။ , 2015b
မိခင်များအကောင်းဆုံးကိုသိ: အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေစဉ်အတွင်းလုံခြုံအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ် sensitivity ကိုပြန်ညွှန်း
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ (2015)
Telzer နှင့် Qu, 2015
စက္ကူကလေးဖွံ့ဖြိုးရေး Biannual အစည်းအဝေး Philadelphia, PA (2015) အပေါ်သုတေသနများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတင်ဆက်
Thapar et al ။ , 2012
A. အ Thapar, အက်စ် Collishaw, DS ထင်းရူး, AK Thapar
ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet, 379 (9820) (2012), စစ။ 1056-1067
PDF ဖိုင် (272 K)
Vaidya et al ။ , 2004
JG Vaidya, AJ Grippo, AK ဂျွန်ဆင်, ဃ Watson
ကြွက်များနှင့်လူသားတွေအတွက် Impulse ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှု: ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏အခန်းကဏ္ဍကို
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1021 (2004), စစ။ 395-398
ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2010
အယ်လ်ဗန် Leijenhorst, BG Moore, ZAO က de Mack, SA Rombouts, ညနေ Westenberg, EA ၏ Crone
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဆုလာဘ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဒေသ neurocognitive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
Neuroimage, 51 (1) (2010), စစ။ 345-355
PDF ဖိုင် (1502 K)
Voorn et al ။ , 1989
ကြွက်များ၏ ventral striatum ၏ Compartmental အဖှဲ့အစညျး: immunohistochemical enkephalin ၏ဖြန့်ဝေ, ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို, dopamine, နှင့်ကယ်လစီယမ်-binding ပရိုတိန်း
ဂျေ comp ။ Neurol ။ , 289 (2) (1989), စစ။ 189-201
အာမခံ et al ။ , 2009
TD အာမခံ, ML Davidson, BL Hughes ကနေ MA Lindquist, KN Ochsner
အောင်မြင်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းဖြန်ဖြေ Prefrontal-subcortical လမ်းကြောင်း
အာရုံခံဆဲလျ, 59 (6) (2009), စစ။ 1037-1050
Wahlstrom et al ။ , 2010a
ဃ Wahlstrom, P. Collins, တီဖြူ, အမ် Luciana
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopamine neurotransmission အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို: အကဲဖြတ်အတွက်အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပြဿနာများကို
ဦးနှောက် Cogn ။ , 72 (1) (2010), စစ။ 146-159
PDF ဖိုင် (372 K)
Wahlstrom et al ။ , 2010b
ဃ Wahlstrom, တီဖြူ, အမ် Luciana
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း dopamine စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲမှုများများအတွက် Neurobehavioral သက်သေအထောက်အထား
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 34 (5) (2010), စစ။ 631-648
PDF ဖိုင် (421 K)
Wessel et al ။ , 2013
ညာဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex ၏ Chronometric လျှပ်စစ်ဆွမော်တာဘရိတ်တိုးပွါး
ဂျေ neuroscience ။ , 33 (50) (2013), စစ။ 19611-19619
Wilmouth နှင့်လှံ, 2009
အီး Wilmouth, LP သို့လှံ
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Hedonic sensitivity ကို: အရသာ reactivity ကိုများနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက် sucrose စားသုံးမှု
Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ , 92 (4) (2009), စစ။ 566-573
PDF ဖိုင် (634 K)
Zaborszky et al ။ , 1985
အယ်လ် Zaborszky, gf Alheid, MC Beinfeld, LE Eiden, အယ်လ် Heimer, အမ် Palkovits
အဆိုပါ ventral striatum ၏ Cholecystokinin innervation: တစ် morphological နှင့် radioimmunological လေ့လာမှု
neuroscience, 14 (1985), စစ။ 427-453
PDF ဖိုင် (10017 K)
စိတ်ပညာဌာန, အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်, 603 အရှေ့ဒံယလေကလမ်း, Champaign က, IL 61820, ယူနိုက်တက်စတိတ်: မှစာပေးစာယူ။
Elsevier, Ltd. ထုတ်ဝေသည်